မင်းကြောင့် ဒါတွေဖြစ်ကုန်ပြီ – alanlaymyar
မင်းကြောင့် ဒါတွေဖြစ်ကုန်ပြီ (18+)
“ အစ်ကိုလေး ….”
အိပ်မပျော်ပဲ မျက်လုံးကြောင်နေသော ကိုသက်အောင် လန့်သွားသည်..။
“ ဟင်…ပုံ့ပုံ့…မအိပ်သေး ဘူးလား…..”
ကွယ်လွန်သူ ဇနီးသည်နှင့် ချစ်တင်းနှီးနှောခဲ့ပုံကလေးများကို ပြန်လည် စမြုံ့ပြန်နေသော ကိုသက်အောင် ရဲ့ ဘော်ဒါကြီးက တင်းမတ်နေသည်..။ ပုံ့ပုံ့က အဲဒါကြီးကို တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့လိုက်လေသည်..။
“ မမသီ သားတွေက အရမ်းသေးပေါက်တာပဲ……”
ကိုသက်အောင် မြင်သာအောင် အနှီးနှစ်ထည်ကို ကိုင်ပြီး မြှောက်ပြလိုက်သည်..။ ကိုသက်အောင် ကုတင်ပေါ်မှထကာ ပုံ့ပုံ့အနားသို့ လာခဲ့သည်..။ ပုံ့ပုံ့ထံမှ သနပ်ခါးနံ့ သင်းသင်းလေးကို ဦးစွာ ရှူရှိုက်မိလိုက်ရသည်..။
“ ထားခဲ့လေ….မိုးလင်းတော့ ..ငါလျှော်လိုက်ပါ့မယ်….“
ပုံ့ပုံ့က လက်ကို ပြန်ရုတ်ပြီး ပြောလိုက်သည်..။ ဝတ်ထားသော ညဝတ်အင်္ကျီလေးအောက်မှ ရွှေရင်နှစ်မွှာက အခုအခံမပါ လွတ်လပ်စွာ…လှုပ်ရှားနေကြသည်..။ ဖြူဝင်းနုနယ်သော ပုံ့ပုံ့မျက်နှာလေးက တစ်စုံတစ်ရာကို တောင်းခံနေသလို မော့ပေးထားသည်..။
ကိုသက်အောင် ရင်တွေ ပူလာသည်..။ ဆီးခုံအထက်မှ ကျင်အောင့်သလို ( လိုးချင်လွန်းအားကြီး ) သော ဝေဒနာတစ်ရပ်ကိုလည်း ခံစားလိုက်ရသည်..။
“ ပုံ့ပုံ့….နင့် ကို…ငါ….ငါ လေ……..”
ပုံ့ပုံ့ ဆတ်ခနဲ လက်ကို ဆောင့်ရုန်းလိုက်ပြီး ထွက်သွားလေတော့သည်..။ ခက်လိုက်တာ…ဒီဝေဒနာ…။ ဘာနဲ့ ကုစားလို့ရမှာလဲ…မိပုံ့ရယ်….။ သီရယ်….မောင့်အဖြစ်ကို မြင်လှည့်စမ်းပါအုံးလား…မိန်းမ ရယ်…။
“ မောင်သက်အောင် ..ခရီးထွက်မလို့…ဆို…….”
“ ဟုတ်ကဲ့..ဒေါ်လေး….ကျနော့်အမေရှိတဲ့ ရွာကိုပါ….”
“ ဟိုမှာ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ…မောင်သက်အောင်……”
“ အဆင်ပြေသလိုပါပဲ….ဒေါ်လေးရယ်…၊ သားတွေကို အမေက မြင်ချင်နေသေးတယ်….၊ သီမရှိတဲ့ နောက် တောမှာ လာနေဖို့ ခေါ်နေတာ…”
“ ဒါဆို…မောင်သက်အောင် ဟိုမှာပဲ အခြေစိုက်တော့မှာပေါ့….ဟုတ်လား…”
“ မင်းသားတွေ ပညာရေး လဲ ရှိသေးတယ်နော်….မောင်သက်အောင်…”
“ ကျနော် မေ့မပစ်ပါဘူး…စိတ်ချပါ…..ဒေါ်လေးရယ်…“
သင်္ကြန်ရက်ကြီးမှန်း ကိုသက်အောင် အမှတ်ရသည်..။ ပုံ့ပုံ့နှင့် အဖော်တစ်စု ရေပက်ခံ ထွက်ရာမှ ပြန်လာကြသည်..။
“ ဖေဖေရေ…သားသားတို့ကို ပြွတ်အသစ်တွေ ဝယ်လာတယ်… ဒီမှာ….”
ပုံ့ပုံ့က ဘယ်သွားသွား ဘယ်က ပြန်လာလာ ကိုသက်အောင် သားနှစ်ယောက်အတွက် ကစားစရာနှင့် မုန့်တစ်ခုခုကတော့ ပါလာတတ်စမြဲပင်…ဖြစ်သည်..။
“ ဒီမှာ နင့်အစ်ကိုလေးက သူ့ရွာပြန်တော့မလို့တဲ့….”
“ အေးပေါ့ဟဲ့…သူ့ခလေးတွေ ဘယ်ထားရက်ခဲ့ပါ့မလဲ….မဟုတ်တာ…”
ပုံ့ပုံ့ ငိုင်တွေတွေလေး ဖြစ်သွားရသည်..။ သူငယ်ချင်းများကိုပင် နှုတ်မဆက်တော့ပဲ အိမ်ပေါ် သို့ ပြေးတက်လာသည်..။ ကိုသက်အောင်တို့ သားအဖတွေက ပြင်ဆင် ထုပ်ပိုးပြီးကုန်ကြပြီ ဖြစ်သည်..။
“ သား…ကိုကြီး…အန်တီလေးနဲ့ နေခဲ့မလား…ဟင်……..”
ပုံ့ပုံ့ နှုတ်ခမ်းလေး ပြတ်ထွက်လုမတတ် ကိုက်ထားသည်..။ စူးရှပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသည့် အကြည့်များနှင့်လည်း ကိုသက်အောင်ကို ကြည့်သည်..။
ကိုသက်အောင် ရင်ခွင်ထဲမှ သားငယ်လေးက လန့်ငိုသည်..။ စူးစူးဝါးဝါး အော်ဟစ်လိုက်သော ပုံ့ပုံ့အသံက ဟိန်းတက်သွားသည်..။
“ ဟဲ့….ဒီကောင်မလေး….ဘေးအိမ်တွေ ကြားကုန်ပြီ….ခက်တော့တာပဲ….”
ဒေါ်လေးက အပြေးအလွှား လာဆူပြီး ပုံ့ပုံ့ကို အိပ်ခန်းထဲ ဆွဲခေါ်သွားသည်..။
“ အဲဒါကြောင့် သမီးကို ပြောတာ….မေမေတို့ စီမံသလို နာခံပါလို့….”
“ ဟင်း……ဝေးသေးတယ်…..အစ်မသေလို့ ညီမကို ဆက်ယူတဲ့လူတွေထဲမှာ ကျမ အပါမခံနိုင်ဘူး…. နေပစေ….ခလေးတွေကို လွမ်းရလို့ သမီးအသဲတွေ ကွဲချင်လဲ ကွဲပစေ…ဒီလိုမျိုးတော့ ဘယ်တော့မှ မယူဘူး….”
“ ဟာ…..တိုးတိုးလုပ်စမ်းပါ..ဟယ်… မယူချင်လဲ နေ… ဘေးအိမ်တွေကြားလို့ ရှက်စရာတွေ ဖြစ်ကုန်မယ်….”
ကိုသက်အောင် အသံတွေကို ကျောခိုင်းပစ်လိုက်သည်..။ အိမ်ရှေ့၌ ခေါ်ထားသော မာဇဒါလေးဘီးကားလေးက အဆင်သင့် ရောက်လာသည်..။ ထိုင်တတ်ခါစ ကလေးငယ်ကို ဒရိုင်ဘာအား ခဏချီခိုင်းထားပြီး အထုပ်အပိုးတွေကို ကားပေါ် ပစ်တင်ပြီး သားကြီးကို လက်ဆွဲကာ ပြေးဆင်းခဲ့ကြသည်..။
နေရစ်တော့ ပုံ့ပုံ့….နင်အမုန်းကြီးမုန်းတဲ့ လူတစ်ယောက် နင့်မျက်စိအောက်မှာ ဘယ်တော့မှ မမြင်စေရတော့ပါဘူး…ပုံ့ပုံ့ရယ်…။ ရင်ထဲမှာ တစစ်စစ် နာကျင် ကိုက်ခဲနေလေသည်..။ သားကြီးက ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်သွားနေသော ကားများကို တာ့တာလုပ်ရင်း လိုက်ပါလာသည်..။ သားငယ်လေးကမူ ကားသံ ဟွန်းသံများ ကြားတိုင်း ဖအေ့လည်ပင်း ကို တင်းတင်းလေး ဖက်ထားတတ်သည်..။
လေယူရာ လွင့်ရပေအုံးတော့မည်…။ အရာခပ်သိမ်းရွေ့လျားပြောင်းလဲနေတာပဲ မဟုတ်လား….။
ကိုသက်အောင် ဆိုတာကလည်း လောကကြီးထဲက လူသားတစ်ယောက်ပေကိုး…။ လောကဓံ တရားက ကျီစားခြင်းကိုတော့ ခံပေအုံးပေါ့…။ ကိုသက်အောင် ဇာတိမြေ မဟုတ်သော ရွာကလေးက အမေ့ချက်မြှုပ်ရွာဖြစ်သည်..။ လူမှန်း သိတတ်စကတည်းက ရန်ကုန်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည့်အတွက် တောရွာလေး၌ မြင်မြင်သမျှ သစ်ဆန်းနေသည်..။ အော်…ဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်ရမှ မိဘအရိပ်ကို သတိရတတ်ကြလေခြင်းပါ…လား……။
“ ဒီမှာ….ခင်ဗျာ…(….) ရွာလေးကို ဘာနဲ့ သွားရမလဲ ..ခင်ဗျာ…”
“ ဟ…နေအုံး…တောရွာက လှည်းကြုံ ရှိတယ်….၊ ဟေ့ ချက်ဖောင်း…. ”
တောရွာလေးမှ ထင်းလာချသော လှည်းကြုံနှင့် ကိုသက်အောင်တို့ သားအဖတစ်တွေ လိုက်လာကြရသည်..။ သစ်ကြီးဝါးကြီး စိမ့်အေးနေသော ပတ်ဝန်းကျင်၌ တဒင်္ဂ ငြိမ်းချမ်းသာယာသော အရသာကို ခံစားရသည်..။
“ ခလေးက ငယ်ငယ်လေးပဲ…မအေကရော…ဗျ….ကိုယ့်ဆရာ…”
“ ဆုံးသွားတာ…တစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်…ဗျာ…တောမှာ အမေရှိတယ်…လေ…..”
“ဟား…သိပ်သိပေါ့ဗျာ…. ဒါဆို ကျန်းမာရေးမှူးကိုသက်မောင်နဲ့ ညီအစ်ကိုပေါ့..ဟုတ်လား…၊ မြို့မှာ အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိတယ်ပြောတာ ခင်ဗျားကိုး…”
“ ကိုသက်မောင်က အငယ်ပါ…ဟုတ်တယ်…ကျနော်က အကြီးလေ…”
လှည်းက အမိုးတော့မပါ..၊ စောင်းကျနေသော နေရောင်တွင် ချွေးပြန်နေကြသည်..။ သားကြီးက လှည်းစီးရသည်ကို အပျော်ကြီး ပျော်နေရှာသည်..။ ရွာအဝင် လှည်းလမ်းက ဂဝံကျောက်များနှင့် နိမ့်ဆင်းသွားသည်..။
“ မြဲမြဲ ကိုင်ထားဗျို့…ကျုပ်နွားတွေက ထိန်းရတာ နဲနဲခက်တယ်..”
လှည်းသမား ချက်ဖောင်းက ပြောပြောဆိုဆို နဖားကြိုးကို တောင့်ပေးရင်း လှည်းလမ်းချောက်အတိုင်း မောင်းချလိုက်သည်..။ ဝရုံးသုံးကားလေး ဖြစ်သွားသည်..။
“ ဗျိုး ဆရာလေး….မြို့က ခင်ဗျားအစ်ကို လာသဗျို့….ပစ္စည်းတွေနဲ့…”
ချက်ဖောင်းက အသံဝါကြီးနဲ့ အော်ပြီး အိပ်ယာလိပ် ၊ သေတ္တာများ ချပေးသည်..။ ကိုသက်နှင့် သူ့မိန်းမတို့ အပြေးအလွှား ထွက်လာကြသည်..။
“ ကိုကြီး သတင်းကြားပြီးကထဲက မျှော်နေကြတာ….”
“သီ…ဆုံးဆုံးချင်း လာဘို့ပဲ…ကိုသက်…. ၊ သီ့ ဆွေမျိုးတွေက ဆွဲထားလို့…”
စကားတပြောပြောနဲ့ အိမ်ခြံဝိုင်းထဲ ဝင်လာခဲ့ကြသည်…။ သရက်ပင်အိုကြီးများ ၊ ဝါးပိုးဝါးများကြောင့် နေရောင်မထိုးပဲ စိမ့်အေးနေသည်..။
“ ဦး….ဦးရေ…ဦး….ဒီမှာ ရေဒီယိုလေး ကျကျန်ခဲ့တယ်……”
“ ဟာ…ဟုတ်သားပဲ….ဘယ်နားက တွေ့တာလဲ..သမီး..ဟင်….”
ကိုသက်အောင် ရေဒီယိုလေး ကမ်းပေးနေသော မိန်းခလေးမျက်နှာကို အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်မိသည်..။ ရင်ထဲဝယ် ဒိန်းခနဲ ခုန်လှိုက်သွားရသည်..။
“ ပုံ့ပုံ့နဲ့ တူလိုက်တာ….”
ပုံ့ပုံ့ကဲ့သို့ မျက်ခုံးလေးတွေ မှောင်နေသည်..။ နှုတ်ခမ်းလေးက ဖူးဝင်းစိုဖောင်းနေသည်..။ ရွှန်းလဲ့တောက်ပသော မျက်ဝန်းလေးများက ဖြူစင်ကြည်လဲ့နေကြသည်..။ တစ်ခုပဲ…ရှိသည်..။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်က ပုံ့ပုံ့ထက် ကျစ်လစ်မာကြောသည်…။ ဖိနပ်စီးမထားသော ခြေထောက်၌ ရွှံ့နီတို့ လိမ်းကျံ ပေလူးနေသည်..။ ယောက်ျားရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ဝတ်ထားသည်..။ ပုဆိုးဟောင်းတစ်ထည်ကို စလွယ်သိုင်းကာ ပုဆိုးထဲ၌ သရက်သီး အချို့ ၊ ဟင်းရွက်အချို့ကို တွေ့ရသည်..။ အသက်…၁၈ နှစ်ထက် မပိုလောက်သေးသော သည်အရွယ်လေးကို ကြည့်ပြီး ရင်ခုံမိသည့်အတွက် ကိုသက်အောင် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် မလုံမလဲ ဖြစ်ရသည်..။
ကောင်မလေးကလည်း သူ့ကို စူးစူးဝါးဝါးကြီး စိုက်ကြည့်လိုက်သော ကိုသက်အောင် အကြည့်ကြောင့် မျက်နှာလေး ရဲခနဲ ဖြစ်ကာ လှည့်ထွက်သွားလေတော့သည်..။ ကိုသက်အောင် ညီက ကိုသက်အောင် ပုခုံးကို ကိုင်ပြီး…
“ ဒီခလေးမလေးက သနားစရာ ကိုကြီးရဲ့…. မောင်လေးနဲ့ ညီမလေးကို လုပ်ကျွေးနေတာ..၊ အစ်ကိုတစ်ယောက်ကလည်း မူးရူးနေတာနဲ့ အချိန်ကုန်နေတာ…”
“ ဖအေကြီးက ဆုံးသွားတာ ကြာပြီ….၊ မအေကလဲ နောက်လင်ယူတာ မကြာသေးဘူး….၊ ကျန်ခဲ့တဲ့ ခလေးတွေက ဥမမယ် စာမမြောက်တွေချည်းပဲ….”
ညနေစာအတွက် ချက်ပြုတ်ကြသောအခါ ညနေက တွေ့ခဲ့ရသော ခလေးမဆီမှ ဟင်းရွက်အချို့ ဝယ်ကြသည်..။
“ အဲဒီလိုပဲ ….တောတိုးပြီး ရောင်းချစားရင်း အသက်ရှင်နေကြရတာ…ကိုကြီး…”
နောင်သောအခါ ကိုသက်ကပင် ထိုခလေးများကို အခါအားလျော်စွာ အဝတ်အစားမှ အစ ထောက်ပံ့နေရကြောင်း သိလာရလေသည်..။
“ တောထဲက ဟာမ သူဟာသူဖြဲ နီတာရဲ….”
“ အယ်…ကိုချက်ဖောင်းကြီးက ညစ်ပတ်တယ်….တော့…သွား မသိဘူး…”
“ နင့်စောက်ပတ်…ညစ်ပတ်ရမလား…ဟ…၊ ဒါစကားထာဖွက်တဲ့ဥစ္စာ…လီး….”
ချက်ဖောင်း ၊ ခြောက်စောင်း ၊ ယောင်ပွ ၊ တို့က မိန်းခလေးများနှင့် အဖွဲ့ကျသည်..။ လသာသော ညများတွင် မြေရှင်းသော ကိုသက်တို့ အိမ်ရှေ့ကွက်လပ်၌ ထုတ်စည်းတိုး ၊ တွတ်ထိုး ၊ ဖန်ခုန် ၊ ကြက်ဖခွပ်တမ်း ကစားကြသည်..။ ချက်ဖောင်း ၊ ခြောက်စောင်း ၊ ယောင်ပွ ဆိုသည်များကလည်း နာမ်စားများသာ ဖြစ်ကြသည်..။ မြင့်သိန်း ၊ စိန်လှ နှင့် အောင်ကြည်တို့မှာ နာမည်ရင်းများ ဖြစ်ပါသည်..။
ကိုသက်အောင်အပါအဝင် လူကြီး လူငယ် လူလတ်မကျန် စကားထာဝိုင်း၌ ပါဝင်နိုင်ကြသည်..။ ယခုလည်း လူ၂၀ ခန့် ဝိုင်းကြီး ဖွဲ့ထားကြသည်..။
“ အံမယ်….လွယ်လွယ်လေး….အဲဒါ တောက်တဲ့ဥ……”
“ မင့်မေလိုး…မိန်းခလေးတွေ ဖော်ရမဲ့ အလှည့်ကွ…ယောင်ပွရဲ့…”
“ နင့်ဟာတွဲလဲ နီတာရဲ…ကဲဖော်စမ်း….“
ဒေါ်ဖားမက ယုတ်ကန်းသည်..။ ဆေးလိပ်မီးတဖွားဖွား ဖွာရင်းက ထပြောသည်…။
“ ဟာ…ဒေါ်ဖားမ..ဒါ ခင်ဗျား ယုတ်ကန်းတာ….”
“ ဘာယုတ်ကမ်းရမှာလဲ…ဟဲ့…၊ နင်တို့ဖော်ကြည့်ပါလား…ဟင်းဟင်း…”
“ ဟေ့ကောင်တွေ ..တွဲလဲကြီးတဲ့…နီတာရဲကြီးတဲ့…ဘာဖြစ်မလဲ…”
“ ဖိုးလေးချစ် ကျွဲသိုးကြီး သိုကြီးပဲ ဖြစ်မယ်….ဟားဟား…ဟား..”
“ မှားတယ်…မှားတယ်…ငှက်ပျောဖူးကို ပြောတာ….”
စကားထာဝိုင်းက အပြိုင်အဆိုင် ကြမ်း ကြမ်းလာကြသည်..။
“ နင့်ကို ငါချ ..ငါ့ကိုနင်တက်ချ…အဲဒါ ဘာလဲ..ဗျ….”
“ ဟဲ့…မအေလိုး ချက်ဖောင်း…နင် အဲဒီအထိတော့ မစုတ်ပဲ့နဲ့….”
“ စကားထာပါ..ဗျာ…ဖော်နိုင်ရင် သိလာမှာပါ…”
စကားထာဝိုင်း ငြိမ်သက်သွားသည်..။ ကိုသက်အောင်ပင် စဉ်းစားမရ ဖြစ်နေသည်..။ ဒေါ်ဖားမနှင့် လူကြီးပိုင်း ခေါင်းချင်းဆိုင် သည်..။ ကိုသက်အောင် စိတ်ဝင်စားနေရသော ခလေးမလေး အပျိုဝိုင်းကလည်း တွတ်ထိုးနေကြသည်..။ ဘယ်သူမှ ဖော်မရကြ…။
ချက်ဖောင်းက ထအော်သည်..။ လမင်းကြီးက ပို၍ ပို၍ သာလာနေသည်..။
“ ကဲ…ပေးပြီ ဟာ… ဖော်….”
ယောက်ျားလေးစိတ်နှင့် ယောက်ျားလေးလို ဝတ်တတ်သော မယ်စိန်က ပြောသည်..။
“ ကိုသိန်းမောင်နဲ့ မမယ်ခင်ပေါ့..ဗျ….သွားကြည့်ပါလား…“
ဝိုင်းထဲမှာ ရယ်သံများက မရပ်ကြတော့…။ ကိုသက်အောင်ပါ အူလှိုက်သဲလှိုက် ရယ်မိသည်..။ ကိုသိန်းမောင်က ပေါင်တစ်ဖက် မရှိ ၊ မမယ်ခင်က မျက်လုံးကွယ်နေသော လင်မယား…။
“ သွား …ကောင်းကောင်း မဖွက်ပဲနဲ့..ခြောက်စောင်းတို့ အုပ်စု…”
ဤနှယ် တောရွာကလေး၌ ကိုသက်အောင် အနေပျော်လာသည်..။ ညီဖြစ်သူက သူနှင့်အတူ ဆေးထိုးအပ် ကိုင်စေချင်သည်..။ ကိုသက်အောင်က ပေါက်တူး ကိုင်သည်..။
“ ဟို ခလေးမ နာမယ် ခုထိ ငါမသိသေးဘူး…ကွ ကိုသက်…”
“ ဟာ…ဘာသိစရာ လိုသလဲ..ကိုကြီးကလဲ….”
“ အာ….တစ်ရွာထဲ နေပြီး နာမယ်မသိဘူးဆိုတော့ ကွာ ..မင်းကလဲ…”
“ ဒါဖြင့် …ကိုကြီးဖာသာ မေး…”
ကိုသက်အောင်က…“ သမီးနာမယ်က ဘယ်လိုခေါ်လဲ့ကွဲ့…သမီး…”
“ ငယ်ငယ်က အမေခေါ်တာ…ချီးပေတဲ့..ကိုလေးက ခေါ်တော့ အာပြဲတဲ့….ခုတော့ ခွေးမလို့ ခေါ်ကြတယ်လေ…ဟွန်း …စွာလို့တဲ့…”
ကိုသက်အောင် ရင်နင့်စွာ ရယ်မောမိသည်..။
“ ဒါဆို…ဦးက သမီးကို မခွေးမ လို့ပဲ ခေါ်ရမှာပေါ့…ဟ.လား…”
“ အင်း…တစ်ရွာလုံးက ဒီလိုပဲ ခေါ်နေတာကိုး…“
“ မကောင်းပါဘူး…ဦး နာမယ်ပေးရမလား….ဦးက ရွေးတတ်တယ်ကွ…“
“ ဟင့်အင်း…နေပလေ့စေ…ပေးမနေနဲ့…အလကားပဲ ခွေးမလို့ပဲ ခေါ်ကြမှာ…”
“ ဒါဆိုလဲ …ဦးက သက်သက်ခေါ်ဘို့ နာမယ် လေး ရွေးထားတယ်..သိလား…”
ကွမ်းသီးခြမ်းကို တမြုံ့မြုံ့ဝါးရင်း အလေးမထားသလို ပြန်ပြောသည်…။ တောင်ယာတဲလေးထဲ၌ ရေနွေးအိုးက မီးခိုးများ အူထွက်နေသည်..။ နွေညနေသည် သစ်ရွက်လေတိုးသံမှ တပါး တိတ်ဆိတ်နေသည်..။ တစ်ခါတစ်ရံ တဲခေါင်မိုးသို့ လာနားသော စာကလေးငှက်များက တကျိကျိ အသံလေးများကို ကြားရတတ်သည်..။
ရေနွေးအိုး မီးထဲသို့ ထင်းချောင်းတစ်ခု မွှေနှောက်ထိုးထည့်ရင်း ပြောလိုက်သည်..။ မျက်နှာနုနုလေးက ကြမ်းတမ်းသော ဘဝဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်ထားရဟန် နွမ်းနေသည်..။
“ ခွေးမရေ…ပဲသီးတောင်း လာရွက်တော့…ဟေ့….ပြည့်နေပြီ…”
ကိုသက်မိန်းမ မခလေးမက လှမ်းအော်လိုက်မှ အနားစုတ်ပြဲနေသော ထမီစလေးကို စုကိုင်ကာ ဒရောသောပါး ထပြေးသည်..။ နှစ်လက်မခန့် ထောင့်တန်းပြဲနေသော ထမီလေးအောက်မှ ဖင်သားဝင်းဝင်းလေးကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ ကိုသက်အောင် ပေါက်တူးဆွဲပြီး တဲလေးအတွင်းမှ ထွက်လာခဲ့သည်..။
မခလေးမက ပဲသီးတောင်းကို ပင့်ပေးရင်း ကိုသက်အောင်ကို လှမ်းကြည့်သည်..။
“ အစ်ကိုကြီးကလဲ တောင်ယာထဲ မဆင်းပါနဲ့ ဆို…အလကား လုပ်နိုင်တာလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့…”
“ ရန်ကုန်မှာ ဦးက ဘာလုပ်လဲ..အစ်မ…”
“ စာရေးဆရာတဲ့ဟဲ့…ဘာမှ လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး…”
“ အော်….စာရေးဆရာ ကိုး…”
စာမတတ်သော ခွေးမရင်ထဲ၌ စာရေးဆရာကြီးကို ရိုသေလေးစားသွားမိသည်..။ စာရေးဆရာကြီးက သူ့ကို နာမယ်ရွေးပေးမဲ့ အကြောင်း မခလေးမကို မပြောဖြစ်တော့…။
တောရွာဘုရားပွဲက နှစ်တိုင်း စည်ကားသည်..။ ခွေးမတို့ အပျိုဖြန်းလေးတွေ အဖို့ ခြစ်ခြုတ်စုဆောင်းထားသမျှ စုဗူးတွေ ဖောက်ကြ ၊ အဝတ်တွေ ချုပ်ကြ ၊ တစ်လုံးတည်း ရှိသော ရွာလယ် ဒေါ်အေးမြတို့ စက်မှာ လက်မလည်နိုင်…။
ခွေးမ စုဗူး ဝါးကျည်တောက်က အကြွေချည်း ထွက်လာသည်..။ စုစုပေါင်း တစ်ရာ့ဆယ့်ငါးကျပ် ရသည်..။ မယ်စိန်နှင့် မမိအေးတို့က ဈေးကြီးသော အိတုံရှန်ကို မှန်းနေကြချိန်တွင် ခွေးမက သာမန် ဝတ်ရရုံ ထမီတစ်ထည်ကိုပင် မနည်း စဉ်းစားနေရသည်..။
“ အစ်မ…ကျမကို စိုက်ပြီး ထမီဝယ်ခဲ့စမ်းပါနော်….”
မခလေးမ မြို့ဈေးသို့ တက်သောအခါ လုပ်ခကြွေးယူစနစ်ဖြင့် မှာရသည်..။ ကိုသက်နှင့် သူ့ခလေးများ ၊ ကိုသက်အောင်နှင့် သူ့သားသားတို့နှစ်ယောက်ပါ ပါလာသဖြင့် မြို့ဈေး၌ ထမီ အပေါစားဝယ်သောအခါ ကိုသက်အောင် မေးမိသည်..။ ခွေးမဘို့ဟု သိရသည်နှင့် ကိုသက်အောင် ရွာမှ အတူလာသော မိန်းကလေးများ ချုပ်ကြသည့် အရောင်အသွေးဆင်တူ ပိတ်စကို နှစ်စုံ မှာချုပ်ပြီး ယူလာခဲ့သည်..။
ကိုသက်အောင်က ခွေးမ ပျော်သွားလိမ့်မည် ထင်ထားခဲ့မိသည်..။ ခွေးမကို မခလေးမ တို့ အဝတ်များ သွားပေးသောအခါ ကိုင်တွယ်ကြည့်ရုံသာ ကိုင်သည်…။ ပြီးတော့ ပြတ်သားစွာ ငြင်းဆိုသည်..။
“ ကျမ ဒါမျိုး မှာတာမဟုတ်ဘူး….မလိုချင်ဘူး…”
“ ဟဲ့…ဒါ …နင့်ကို သူများ လက်ဆောင်ပေးတာ…ခွေးမရဲ့….“
“ ဘယ်သူက ပေးတာလဲ…ဒီလောက်အများကြီးကို ..”
“ နောက်တော့ သိမှာပေါ့…ဟယ်…ယူထားလိုက်ပါ…”
ထိုနှစ် ဘုရားပွဲ၌ ခွေးမ ရှေ့တန်း၌ တန်းစီခွင့် ကန်တော့ပွဲ ရွက်ခွင့် ရလိုက်သည်..။ တော ဆိုပေမယ့် အဝတ်အစားဖြင့် ချိန်ထိုးပြီး တန်းစီခိုင်းသော အလေ့အထ ရှိနေသေးသည်..။ ကိုသက်အောင် ဦးစီးသော ကာလသားတစ်သိုက်က အိုးစည်ဝိုင်းဖြင့် သံချပ် တွေ ထိုးကြသည်..။ လူကြီးတွေ အရမ်းသဘောကျနေကြသည်..။
“ မောင်သက်အောင် ရောက်လာမှ ဒို့ရွာလေး စည်ကားလာသဟေ့…”
သည်လိုနှင့် ကိုသက်အောင် ရွာထဲ၌ ဝင်ဆန့်လာသည်..။ လူချစ်လူခင်လည်း ပေါလာသည်..။
“ ခွေးမ…နင့်အင်္ကျီ နဲ့ထမီက ငါးရာကျော် အေ့….သိရဲ့လား….”
“ ဟင်…မမယ်စိန်က ဘယ်လိုလုပ် သိလဲ…”
“ ကိုသက်အောင်ကြီး ငါ့ကို ခေါ်ပြီး လိုက်ဝယ်တာ…တော်ရေ့…၊ အမလေး…ဒါဆို ချာတိတ် ကြိုက်ပါ့မလား မသိဘူး…လိုလိုမယ်မယ် အပူရောင် အလေးရောင် နှစ်စုံချုပ်မှ….နဲ့ ဗျာကိုများနေတာပဲ…ဟဲ့…”
“ ဟင်…ကိုသက်အောင်ကြီး ချုပ်ပေးတာလား…ငါက မခလေးမတို့ အရင်လိုပဲ…ဝယ်ပေးတာမှတ်ထာ တော့…”
ခွေးမ ရင်ထဲ မကြည်မလင် ခံစားရသည်..။ အသက် ၃၀ ကျော် ဒီလူကြီးက ဘာလို့ ငါ့ကို အဝတ်တွေ ချုပ်ပေးရတာလဲ…သနားလို့လား …ခွေးမအတွက် ပထမဆုံးသော အိပ်ပျက်ညလေး ကြုံခဲ့ရသည်..။
“ အစ်ကိုကြီး…စဉ်းစားပြီး ပလား…၊ သေချာပြီ လား….”
“ စဉ်းစားပြီးမှ ပြောတာ….ကိုသက်ရ….သေချာတယ်…..”
“ ကောင်မလေးက သိပ်ငယ်သေးတယ်….ဒါပေမယ့် သူ့ဦးလေးတွေ အသိုင်းအဝိုင်း တီးခေါက်ကြည့်ပါအုံးမယ်….”
ကိုသက်အောင် ချစ်သော ချာတိတ်ကို လက်ထပ်ရန် အဆင့်ဆင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး နောက်တစ်နှစ် သင်္ကြန်ရက် အတက်နေ့၌ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ကြသည်..။ ကိုသက်အောင်ကိုယ်တိုင်က ကံကောင်းလေသလား ၊ ကံပဲ ဆိုးချင်လေသလား မသိ..။ မနူးမနပ် မလည်မဝယ်နှင့် ခွေးမလေးက အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ်နှင့် အိမ်ထောင်ပြုရန်း လက်ခံခဲ့သည်..။
“ ချာတိတ်…အစ်ကို့ကို ချစ်လား…ဟင်….”
“ ဟဲ ဟဲ…ဟဲ….”
“ နောက်တာမှ မှုတ်တာ… ခလေးဖအေကြီး ဘယ်ချစ်မှာလဲ…လို့…”
မင်္ဂလာဆောင် မဏ္ဍာပ်ဆီမှ ဆူညံသော ဓါတ်စက်ဖွင့်သံ ကြားနေရသည်..။ မယ်ဒလင် တစ်လက် အော်ဂင် ဂစ်တာ ..တစ်ခုခုဖြင့် သီချင်းဆိုချင်သူတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေး မြူးပျော်နေကြသည်..။ မူးရူးနေကြသည်..။
ကိုသက်အောင် ရင်၌ အမှား မုန်တိုင်းကြီး ပြင်းပြင်းပြပြ ရိုက်ခတ်လှုပ်ရမ်းနေလေပြီ…။ သတို့သမီးအတွက် စံပယ်ပန်းကုံးများ ထည့်ထားသော ဆကာကုံးလေးက အခန်းထောင့်မှာ ရှိသည်..။ လေတိုးသဖြင့် ယိမ်းထိုးလှုပ်ရှားနေသော မီးခွက်မှ အလင်းရောင်လေးက ကျဥ်းမြောင်းသော အခန်းလေးထဲ၌ မှုံဝါးဝါး လင်းနေသည်..။
“ ငါကတော့…နင့်ကို ချစ်တယ်….”
ပြောပြောဆိုဆို ကျစ်လစ်သန်မာသော ကိုယ်လုံးလေးကို ပွေ့ယူပြီး အိပ်ယာထဲသို့ လှဲချလိုက်သည်..။ ခြင်ထောင်က အလိုလို လုံးထွေး ကျလာသည်..။
“ အဲဒီလို…မလုပ်နဲ့…ဦးရယ်….ကျ….ကျမ ….ကြောက်တယ်…..“
ချာတိတ်အသံက တအားအော်ဟစ်သံမျိုးတော့ မဟုတ်…။ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ပြီး ရုန်းကန် တွန်းထိုးနေခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်သည်..။ ကိုသက်အောင်က ပထမဆုံး ခြင်ထောင်ကို သေချာ ချလိုက်သည်…။ ချာတိတ်က လူးလဲ ထရန် ကြိုးစားလိုက်သေးသည်..။ ကိုသက်အောင်က လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ချာတိတ်ကို ပွေ့ဖက်ထားလိုက်သည်..။
“..ဦး…အ…အဟင့်…မလုပ် ပါနဲ့…ဦး ရယ်…..ကျမ ကြောက်တယ်….“
အတန်တန် တောင်းပန်နေသည့်ကြားမှ အပေါ်အင်္ကျီလေး ကျွတ်သွားလေသည်..။ ဝယ်ပြီးကာစ ဘရာစီယာလေးသာ ကျန်တော့သည်..။ အရွယ်သစ်သစ် ဖူးပွင့်စ စပယ်ငုံလေး အစုံအလား သန့်စင်မွှေးပျံ့ နေသော ရင်သားလေးနှစ်မွှာကို ဘရာစီယာပေါ်မှ ဖိ၍ ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့လိုက်သည်..။
ချာတိတ်နှုတ်ခမ်းလေးကို ပူနွေးချိုမြိန်စွာ စိတ်ကြိုက် စုတ်ယူလိုက်သည်..။ တအင်းအင်း ကော့တက်သွားရှာသော ချာတိတ်ခါးလေးမှ ထမီစကို လျှော့ချပစ်လိုက်သည်..။ ချာတိတ်လက်ဖဝါးလေး အစုံက သူမဟာလေးကို စုံကိုင်အုပ်ထားလိုက်သည်..။
လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို စုထားသလိုဖြစ်နေ၍ ရင်သားလုံးလုံးဖွေးဖွေးလေးက ပေါက်စီလေးများ ပမာ လုံးတက်လာသည်..။ နို့သီးခေါင်းလေးများက ရေသဖန်းသီးအမှည့်လို ရဲထွတ်နီမြန်းနေသည်..။ ကိုသက်အောင်က အပေါ်မှ ခွစီးပြီး နို့သီးလေးနှစ်လုံးကို ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကို ဖိကြိတ်ပြီး ချေပေးလိုက်သည်..။
ခေါင်းလေးကို ဘယ်ညာ တွင်တွင် ရမ်းခါရင် အံကလေး ကြိတ်ခါ တိုးတိုးလေး ကြိတ်အော်သည်..။ အသားလေးများက မျှားဆိပ်သင့်သော သမင်မလေးနှယ် တုန်ခါနေသည်..။ ကိုသက်အောင်က မှုံဝါးဝါး မီးရောင်ဖြင့် ချာတိတ်ပေါင်ကြားကို ဖြဲကြည့်လိုက်သည်..။ ချာတိတ်က အမွှေး မစုံ…။ စောက်မွှေးဆို၍ တစ်ပင်တစ်လေမျှပင် ရှာမတွေ့…။ ရင့်ထော် ကြမ်းတမ်း ရှုပ်ပွသည့် စောက်မွှေးရင့်ရင့်ကြီးများကြားမှ ပြဲအာသော စောက်ဖုတ်ကြီးများကို လိုးခဲ့ရသော ကိုသက်အောင်အတွက် အမွှေးနုနုလေးများသာ ရှိသေးသော စောက်ဖုတ်လေးမှာ အဆန်းတကျယ် ဖြစ်သွားရသည်..။
အကြောက်အကန် ငြင်းဆန်နေသော ချာတိတ်လက်လေးနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းလေး ကိုင်ဖယ်လိုက်ရာ ဖောင်းမို့နူးညံ့နေသော ဆီးခုံလေးမှ ကွဲဆင်းသွားသော ပေါင်ကြားထဲ ညှပ်နေသည့် စောက်ဖုတ် နုနုလေးကို တွေ့လိုက်ရသည်..။
ကိုသက်အောင်က ပုဆိုးကို ခေါင်းပေါ်မှ ကျော်ပြီး ချွတ်ကာ ခြင်ထောင်ခြေရင်းသို့ ပုံချလိုက်သည်.။ အမွှေးကြမ်းကြီးများဖြင့် ထူထပ်စွာ ပေါက်နေသော ဂွေးဥတွဲတွဲကြီးက ချာတိတ်ပေါင်လေးပေါ်သို့ အပုံလိုက် ထွေးကျနေသည်..။ မတ်တောင်နေသော ခလေးနှစ်ယောက်ရပြီးသား လီးကြီးက ဆာလောင်စွာဖြင့် ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ တုန်ခါနေသည်..။ ခွေးမ က မျက်စိမဖွင့်ပဲ တင်းနေအောင် မှိတ်ထားသည်..။ စောက်ဖုတ်လေးက ကြပ်ညှပ်ပြီး တင်းနေအောင် စေ့နေသည်..။ ကိုသက်အောင်က လီးထိပ်ကြီးဖြင့် အကွဲကြောင်းလေးကို ထိုးကာ ကော်တင်ပေးလိုက်သည်..။
ပြစ်ချွဲသော အရေများက လီးထိပ်မှ စိုစွတ်စွာ ထွက်ကျလာလေရာ စောက်ပတ်ကလေးမှာ ဝင်းလက်တောက်ပသွားလေသည်..။ သို့သော် တင်းတင်းကြီး ညှစ်ထားသဖြင့် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးမှာ စေ့ကပ်နေသေးသည်..။ ကိုသက်အောင်က အကွဲကြောင်းလေးထဲသို့ လီးထိပ်နီနီကြီးကို တေ့ကပ်ပြီး ဖင်အားနှင့် ဖိချနေသော်လည်း စေ့ထားသော ပါးစပ်အတွင်းသို့ ငှက်ပျောသီး ထိုးထည့်နေရသလို ချော်၍ ချော်၍ ထွက်နေပြန်သည်..။
ကိုသက်အောင် ချွေးပြန်လာသလို အပျိုစင်မလေးမှာလည်း ရှက်လွန်းကြောက်လွန်းနေသဖြင့် သတိမလစ်ရုံတမယ် ခံစားနေရရှာသည်..။
“ ညီမလေးကလဲကွယ်…လိမ္မာသားနဲ့…နဲနဲ ကားပေးပါဆို…..”
“ ကြောက်တယ်…အီး….ဟီး….ကြောက်…ကြောက် တယ်…..”
ပြဿနာ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ဖြစ်နေရသည်..။ နောက်ဆုံး ကိုသက်အောင် ခြေနှစ်ချောင်းကို ဆွဲကားလိုက်ပြီး တစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ် ဆွဲတင် ထမ်းထားလိုက်ကာ ကျန်တစ်ဖက်ကို ဖင်နှင့် ဖိချ ထိုင်ထားလိုက်သည်..။ ထိုအခါမှ ကျဥ်းမြောင်းသော အပျိုပေါက်မလေး၏ ဂယ်ပေါက်လေးက ကိုသက်အောင် ၏ ပစ္စည်းကြီးထိပ်၌ တေ့မိသွားပြီး ရှုံ့ခနဲ ဖြစ်သွားသည်..။
ကိုသက်အောင် သိပ်ပြီး အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ ဒစ်ကြီးမြုပ်သွားအောင် ပထမအဆင့် အနေဖြင့် လိုးသွင်းလိုက်သည်..။
အတော်အော်သော ကောင်မလေးဖြစ်သည်..။ တော်ပါသေး၏..။ စပီကာမှ ဖိုးဆိုချင် တစ်သိုက်က အသံကျယ်လောင်စွာဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားသဖြင့် အပြင်သို့ ကျယ်လောင်စွာ အသံမထွက်ခဲ့ချေ…။ စကတည်းက အခြေအနေက သိပ်မကောင်းချေ..။ ပစ္စည်းချင်းက မမျှမတ ဖြစ်နေသည်..။ ဆင်လီးနှင့် ဆိတ်ဖင် လိုးနေသလို ဘယ်လိုမှ မဝင်နိုင်အောင် တင်းကြပ်လွန်းနေသည်..။
ကိုသက်အောင် ကိုယ်တိုင်ပင် ကျင်စပ်သော ဝေဒနာကို လီးထိပ်မှာ ခံစားနေရသည်..။ ယောက်ျားဆိုသည်ကလည်း အပေါက်ကျဉ်း ကြိုက်တတ်ကြသော အမျိုး ဖြစ်သည်..။ ကိုသက်အောင် မရမက ဖိသွင်းသည်..။
ကောင်မလေးထံမှ တော်တော်နှင့် အော်သံ ထွက်မလာ…။ အတန်ကြာ အသက်အောင့်ထားပြီးမှ နာကျင်စွာ အော်သံ ထွက်လာသည်..။ ကိုသက်အောင် လက်တစ်ဖက်က တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော ပုခုံးပေါ်မှ ခြေတစ်ဖက်ကို ထိန်းကိုင်ထားရသည်..။ ကျန်လက်တစ်ဖက်က အမွှေးနုလေးများ ရှင်သန်ကာစ ဆီးခုံလေးကို ပွတ်သပ်ပေးနေရသည်..။ စက်ဝိုင်း ဝိုင်းသလို အဆက်မပြတ် ပွတ်ပေးနေရင်း စပါးလုံးတစ်ထောက်စာမျှ လောက်စီ နှဲ့သွင်းနေရသည်..။
“ အင့်…..အင်း….ကျွတ် ကျွတ်…..အင့်..အင်း….“
ကောင်မလေး က မင်္ဂလာစောင်ကြီးကို ဆွဲယူပြီး ပါးစပ်နှင့် တေ့ကပ်ကာ လူနာတစ်ယောက် ငြီးသလို ကြိတ်ပြီး ငြီးနေရှာသည်..။ မျက်ရည်စီးကြောင်းလေးက ပါးပြင်ကို ဖြတ်၍ ခေါင်းအုံးပေါ် ကျနေသည်..။
“ ဟ…..အား….အင့်အင်း…..အင့်အင်း……….အ..အ…အိ….အ ..“
တဖြည်းဖြည်း အဆုံးထိ ရောက်သွားပြီး ပူနွေးသော ကောင်မလေး ဟာလေးက တင်းကြပ်စွာ စုပ်ယူထားခြင်းကို ခံလိုက်ရလေသည်..။
ကိုသက်အောင် မြို့မှာ ရှိစဉ်က ခလေးထိန်း မချို၏ ပုလွေမှုတ်ပေးခြင်းကို ခံစားရဖူးသည်..။ ပူနွေးသော အာငွေ့နှင့် လျှာဖျားလေးများကလိပေးမှုက အရသာထူးကဲစွာ ခံစားရခဲ့ဖူးသည်..။
သို့သော် ယခု သည်ကောင်မလေး၏ အပျိုဖော်ဝင်စအရွယ် သန်မာသော ကြွက်သားများဖြင့် လိင်တန်ကို ဖြစ်ညှစ်ခါ စုပ်ယူထားသလို ခံစားရမှုက စအိုထဲကပါ မခံနိုင်အောင် သူ့လိင်တန်ကြီးကို ပြန်မနှုတ်သေးပဲ စောက်ခေါင်းလေးထဲ၌ စိမ်ထားပြီး မှိန်းနေလိုက်မိသည်..။
ကောင်မလေးက တစ်ချက်မျှ ငြီးတွားပြီး အနည်းငယ် လူးလွန့်လိုက်သော အခါကျမှ လီးထိပ်ကြီးမှာပါးစပ်အတွင်းမှ ထွေးထုတ်ခြင်း ခံလိုက်ရသော ခရမ်းချဉ်သီးကြီးနှယ် ပလွတ် ခနဲ ကန်ထွက်လာသည်..။ ဒစ်မထွက်ခင် အချိန်မီ ပြန်ပြီး ဟန့်တားနိုင်သဖြင့် ကွင်းလုံးကျွတ် ထွက်မသွားပဲ ပထမ သွင်းစဉ်တုန်းကလို ပင် ငြင်သာစွာ ဆီးခုံလေးကို ပွတ်လိုက် အစိလေးကို လက်ညှိုးလေးဖြင့် ကလိလိုက် လုပ်ပေးရင်း ချော့သွင်းလေး သွင်းလိုက်ပြန်သည်..။
မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ငြီးတွားသံများက ကွဲပြားခြားနားကြသည်ကိုလည်း ကိုသက်အောင် သတိထားမိလာသည်..။ ဒီကောင်မလေး ငြီးတွားပုံက ဗိုက်အောင့်လူနာလို အသက်အောင့် အောင့်ပြီး ညီးညူတတ်သည်..။ အဆုံးထိ ရောက်သွားပြန်သောအခါ ယခင်ကလိုပင် တင်းကြပ်စွာ ဖမ်းယူ ဆုတ်ညှစ်ထားခြင်းမျိုး ခံရပြန်ပြီး ကိုသက်အောင် သုတ်သွေးကြောကို စုတ်ထုတ်နေသလို တစိစိ ခံစားနေရသည်..။ ထိုသို့ သုံးလေးကြိမ်မျှ အစုပ်အတန့် လေးများကို ခံစားရပြီးနောက် ချောင်ချိသော လမ်းကြောင်းလေးအသွင်ပြောင်းလာလေသည်..။ ပြစ်ချွဲချွဲ အရေများကလည်း တစိမ့်စိမ့် ကျဆင်းပေးလာသဖြင့် ကျဥ်းမြောင်းသေးကွေးလှသော ကြွက်တွင်းလေးသို့ တံပိုးတုံးကြီး ရေဆွတ်ဆောင့်ရသလို အပေါက်သစ်ချဲ့နေရသဖြင့် ပင်ပန်းလှသည်..။
ကောင်မလေး၏ အောက်ဖက် အတွင်းပေါင်လေးပေါ်၌ စေးထန်းသော သွေးစလေးများ ယိုစိမ့် ကျဆင်းနေသည်..။
“ အင့်…အင့်…..အင့်……..ဟင့်….အ….အ မေ….ရေ…….”
ပါးစပ်ကို စေ့ပိတ်ထားသည်…။ ( အမေရေ ) အော်သံက တိုးတိုးဖွဖွလေး ဖြစ်သည်..။ အတန်ကြာ ညှောင့်ပေးပြီးနောက် ကိုသက်အောင် နို့လေးနှစ်လုံးကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဆွဲကိုင်ပွတ်ချေ ဆုတ်နယ်ရင်း ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်လေသည်..။
“ အ….အ…..အ အ…ရှီး….အ..အ မလေး….နော်….အင်း…ဟင်း ဟင်း………”
ကောင်မလေး တစ်ကိုယ်လုံး ငလျင်လှုပ်သလို ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ဆောင့်လှုပ်သွားပြီး ပူနွေးသော သုတ်ရည်များ ပြွတ်ခနဲ အန်ကျလာလေတော့သည်..။ ထိုအခါ ကျမှ ကိုသက်အောင်က ခပ်နာနာလေး ထပ်ဆောင့်ပြီး သူကိုယ်တိုင် သုတ်ရေများကို ကောင်မလေး အင်္ဂါဇတ် အခေါင်းထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးသွင်းဖိကပ် ဖိကပ်ထားပြီး အားရပါးရ ပန်းထည့်လိုက်လေတော့သည်..။
“ အား…နာလိုက်တာ…….အား…အား…..စပ်လဲ စပ်တယ်…….“
“ နောက်တော့ ပျောက်သွားမှာပါကွယ်…..ခဏ နာတာပါ….နော်….“
“ ဦး မကောင်းဘူး….မနက်ဖန် မင်္ဂလာဆောင်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး…ပေါင်ထဲက အကြောတင်နေသလိုပဲ…အောင့်တောင့်တောင့်နဲ့…အင်း…အ…..”
မှန်သည်…။ မိုးလင်း မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပသောအခါ ခြေလှမ်းလေးတွေ တုံ့ဆိုင်းနေကြရသည်..။ မသိမသာလေး ကွတကွတ ဖြစ်နေရရှာလေသည်..။ ကိုသက်အောင် သနားသွားမိလေသည်..။
“ ဒီညတော့ ရွာတောင်ပိုင်း ငလျင်လှုပ်ပြီ…ဟေ့..”
ကာလသားတစ်ချို့က ကိုသက်အောင်နား ကပ်ကာ စကြနောက်ကြသည်..။ ကိုသက်အောင်က ပြုံးပြီး အသာနေလိုက်သည်..။ ခွေးမသားလေးတွေ ညက ကမ္ဘာ တစ်ခြမ်း စောင်းသွားတာ မှ မသိလိုက်ကြတာ..။
“ မိန်းမရေ….ပစ္စည်းတွေ ..သွားပို့ကြရအောင်….”
“ ကို့ ဖာသာ သွားပို့တော့….သူများ လမ်း မလျှောက်နိုင်တော့ဘူး…”
“ သွားပေါ့…ဘာလို့ သူများ …လမ်းမလျှောက်နိုင်အောင် လုပ်သေးလဲ…လို့….”
ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်ပြီး ကာလသားအချို့နဲ့ ပစ္စည်းများ လိုက်ပို့…ငှါးထားသော ပစ္စည်းများ အပျောက်အရှ စစ်နှင့် မိုးချုပ်သွားလေသည်..။ ထမင်းစား ရေမိုးချိုးပြီးတော့ ည ၈ နာရီ…။
“ ပွဲ မစသေးဘူးလား…ကိုသက်အောင်…”
ရင်းနှီးနေသော ခြောက်ပေါင် ကြည်ဝင်းက နောက်သည်..။
“ ပွဲက မနေ့ကထဲက ပြီးသွားတာ..ဟ…၊ ဒီည နင်တို့ ကာလသားတွေ ချောင်းမယ် မို့လား …အေး…ဒို့ သိုးနေအောင် အိပ်မှာ…..”
“ သေကွာ…တောက်….ဟား ဟား..ဟား…ဟား..”
ထိုနေ့က တကယ်လည်း ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပဲ ခြေပစ်လက်ပစ် အိပ်ပစ်လိုက်ကြသည်..။ ဘုမသိ ဘမသိ ခြင်ကိုက်ခံပြီး လာချောင်းကြသော ခြောက်စောင်းနှင့် ယောင်ပွ အရက်မူးမူးနှင့် အိပ်ပျော်သွားကာ မနက် လေးနာရီ တုံးခေါက်မှ အိမ်အောက်က ထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်ဟု နောက်မှ သိရလေသည်..။
“ ကိုကြီး….ထမင်း စားမယ်လေ….”
အလယ်…ဘယ်သူသင်ပေးလိုက်သလဲ မသိ..။ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေ ပြောင်းသွားသည်..။ ကိုသက်အောင် ကြည်နူး ကျေနပ်စွာ ထမင်းစားသည်..။
“ ညည်းကို ဘယ်သူခေါ်ခိုင်းတာလဲ…အဲ့ဒီလို…”
“ ကိုယ့်ဖာသာ …ခေါ်တာ…ဘာလဲ ..မကြိုက်ဖူးလား…ဒါဖြင့် ..ဦးပဲ…ပြန်ခေါ်ရမလား..“
“ ဟဲ့…အို…မကြိုက်လို့ မှုတ်ပါဘူး…နားထောင်လို့ ကောင်းလွန်းလို့…“
အသက်ကွာလွန်းသော အိမ်ထောင်ဖက်များမို့ …အပြောအဆို အနေအထိုင် ကအစ တစ်ပန်း ရှုံးလွန်းလှသည်..။ အပြောကလက်သလိုလို စောက်ပေါကြီးပဲ ဖြစ်နေရသလိုလို တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးကြီး…။
“ ကိုကြီး…က မျက်နှာကြီး…တည်မထားနဲ့..ကွာ…သူများ ကြောက်တယ်…“
အဲ့လိုများ မညှုလိုက်နှင့် …။ ကိုသက်အောင် မျက်နှာမှ သိက္ခာသမာဓိ အလွှာလိုက် အလွှာလိုက် ကွာကျသွားကြရသည်..။
“ ကိုကြီးကို …သူများ အရမ်း ..အရမ်း..ချစ်သွားပြီ…သိလား…”
“ မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ည..က….ကဲ သိပလား…..”
ဟုတ်ပါ့ဗျာ…။ ဒါကြောင့် ပညာရှိစကားများ တယ်မှန်ကြသကိုး…။ မခိုးခင်လိုး..၊ မလိုးခင် ထိုး…၊ မထိုးခင် နမ်း..၊ မနမ်းခင် ဖက်…တဲ့…။ အမလေးလေး…နော်…၊ ဒီဟာမလေးနှယ် ဗျာ…။ ဒီလောက်ကြီး နာကျင် ကိုက်ခဲပြီးမှ ခံစားရတဲ့ အချစ်အရသာကို တပ်မက်လွန်းလှပါတယ်…။ ကိုသက်အောင်ကတော့ စပ်ဖြင်းဖြင်းနှင့် ထိပ်က နာကျင်နေဆဲ…။
တောဓလေ့ဆိုတော့လဲ ..တောအနေအတိုင်း နေတတ်အောင် ကျင့်ရပြန်သည်..။ ထင်းခွေ ရေခပ်…နွားကျောင်း အလုပ်များနှင့် မြေပေါက်မြောင်းတူး တောင်ယာအလုပ်တွေက ကိုသက်အောင် အဖို့ ယခုမှ စတင် ရင်းနှီးရသော အလုပ်များမို့ ဖျားရပြန်သည်…။
“ သက်အောင်ရယ်..ဒါ..မိုးထဲ ရေထဲ အချိန်ကွ…မင်းက ဘာလို့ များ ဖျားနေရပြန်တာတုန်း..ဟ…..ငတို့တုန်းကဆို …တစ်လတိတိ..ခြင်ထောင်ထဲက မထွက်ဖူး..မောင်…”
ဘိုးလေးချစ်က ရယ်စရာ အလွန်ပြောသည်..။ ခွေးမက ထိုစကားကြားသောအခါ ကိုသက်အောင် နားဝသို့ ကပ်ပြီး…..“ ..နှာဗူးကြီး…..” ဟု တိုးတိုးပြောသည်..။ ကိုသက်အောင်က ရယ်နေသည်..။
“ ကိုကြီး…ပစ်သွားရင်…သူများ တကယ် သေပစ်မှာ…သိရဲ့လား….”
“ဟင်…ဘယ့်နှယ်ဟာ စိတ်ကူးပေါက်ပြန် တာလဲကွာ…”
“ ကြိုပြောထားတာ…ဘာစိတ်ကူး မှ ပေါက်လို့ မဟုတ်ဖူး…“
“ ချစ်လို့မှ ယူထားပြီးပြီပဲကွယ်…ဘယ် ပစ်ရက်မှာလဲ…“
“ အင်းပါ…အင်းပါ…မပစ်ရင် ပြီးတာပါပဲ…တော်….”
သူ့စကားလုံးတွေက အသဲမှ လာမှန်း ကိုသက်အောင် သိသည်..။ စာမတတ် ပေမတတ် စကားတန်ဆာ မဆင်တတ်ပြန်တော့ စကားလုံးတွေက မလှ…။ တော် တို့ တော့ တို့ ငါ တို့ သုံးလေ့ရှိသည်မို့ ကြီးသူနဲ့ ငယ်သူ နားထောင်ရသောအခါ အဆင်မပြေချင်ပေ…။ သို့သော် ကိုသက်အောင် ဖြည့်စွက် နားထောင်တတ်ခဲ့သည်..။
ကံကြမ္မာသည် ရဟတ်လို လည်ပတ်တတ်သည်..ဟု ဆိုကြ၏..။ ကိုသက်အောင် အကြွင်းမဲ့ လက်ခံချင်ပါသည်..။ ကမ္ဘာတစ်ဖက်ခြမ်း ၌ အပျော်ကလေးများ ဝေစီနေစဉ်မှာ သည်ဘက်ခြမ်း ၌ အလွမ်းတေးဖွဲရန် ကံကြမ္မာက ဇယားချထားပြီး ဖြစ်နေတတ်သည်..။
“ ဦး….ကျနော့် နာမယ်..သိန်းတိုးပါ…တောရွာလေး ရွာသားပါ..။ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်သွားလုပ်တာ…၂ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်…၊ အခု ရွာကို ပြန်လာတာပါ..၊ အလည်ပဲ ဆိုပါတော့…“
အဲဒီ..သိန်းတိုးက ခွေးမနဲ့ ငယ်ရီးစားတဲ့ဗျာ…။ ကိုသက်အောင် ဘယ်သိပါ့မလဲ…။ အိမ်ပေါ်လာတော့လည်း ဧည့်ခံရတာပဲပေါ့..။ အဲ…ခွေးမလည်း တောထဲက ပြန်လာရော…
“ ဟင်…ကိုရင် သိန်းတိုး…..ဟယ်…”
အားရဝမ်းသာကြီး ခွေးမ ပြေးတက်လာတယ်..။ ဝမ်းနည်း ပက်လက်ကြီး မျက်နှာပျက်သွားတယ်..။ ကိုသက်အောင် ဒါတော့ သတိထားမိတယ်..။
“ နင်…နေကောင်းတယ်နော်…. ခွေးမ…”
“ မင်္ဂလာဆောင်တာတောင် ငါ့ကို မဖိတ်ဘူး…ဟာ…”
“ လူကြီးတွေ အမြန် စီစဉ်ကြတာ..ဟ…”
ကိုင်း…ကိုသက်အောင် ရှေ့ထားပြီး ပြောနေကြတဲ့ စကားတွေ လေ…။ ကိုသက်အောင် ဖြေးလေးစွာ ထရပ်လိုက်သည်..။
“ သိန်းတိုး….စကားပြောရစ်ဦး ကွာ…..ဦး ရေသွားချိုးလိုက်အုံးမယ်…”
“ အိုး….မိုးချုပ်နေမှ ..မချိုးနဲ့…ပြန်ဖျားနေအုံးမယ်…”
ကိုသက်အောင်က သည်စကားတွေကို သိန်းတိုးရှေ့၌ အာဏာ ပြချင်၍ သာ သုံးသော စကားဟု နားလည်လိုက်သည်..။ သိန်းတိုးကတော့ သူ့လင်အတွက် စိုးရိမ်တတ်လိုက်တာ ခွေးမရယ်….လို့ တွေးသည်..။
ကိုသက်အောင်က ခန့်ညားရင့်ကျက်စွာ ပြုံးရင်း အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်..။ ခွေးမနှင့် သိန်းတိုးက သူသွားရာသို့ ငေးမိကြသည်..။
“ ခွေးမ…နင် ..ဒီလူကြီးကို ဘာလို့ ယူတာလဲ..ဟင်….”
“ ချစ်လို့ပေါ့ဟဲ့….သိန်းတိုးရဲ့…မချစ်ပဲနဲ့ ညားမလား….“
“ နင်…ငါ့ကိုတော့ မစဉ်းစားဘူးပေါ့…ဟုတ်လား….”
“ အေး….ငါ မစဉ်းစားခဲ့မိဘူး…”
“ ရက်စက်လိုက်တာ….ခွေးမ ရယ်…..“
ပြောပါ …သိန်းတိုး..နင်ပြောချင်သလို ပြောသာပြောပါတော့…။ ငါ့ဘဝက တွယ်ရာမဲ့ ဗေဒါ…ရေမှာ တွေ့တဲ့ အမှိုက်သရိုက်မှန်သမျှ တွယ်မိကပ်မိတာ..ငါ့အပြစ်တဲ့လား…သိန်းတိုးရယ်…။ ဒါ..ခွေးမအတွေး…ဒါပဲ…လူတွေမှာ အဲဒီ အတွေးနဲ့ ကိုယ်လိုရာ ဆွဲယူခဲ့တတ်ကြတာက…အမှား…။
“ ငါ သိပ်မှားသွားပြီ….ကိုသက်…”
“ ရော်…ဖြစ်ရပြန် ပြီ….”
“ ဒီကောင်မလေးမှာ ရီးစားရှိနေတာ …မင်းမသိဘူးလား…..၊ ခုတော့ ငါက လူဆိုးကြီးလိုလို…ငွေရှင်ကြေးရှင်ကြီးက မတရား သိမ်းပိုက်ထားသလိုလို…”
“ ဟ…မနေ့က ငါ့အိမ်လာလည်တယ်ကွ….သိန်းတိုး တဲ့….”
“ ဟာကွာ….အလကား ကောင် ..ဖဲသမား…..ကောင်မလေးကို တဖက်သတ်ကြိုက်နေတာ….မဟုတ်တာတွေ..ဗျာ…”
ခက်သည်…။ ကိုသက်အောင်လို လူစားကလည်း အရှားသား…။ အချစ်နဲ့ စပ်လျဉ်း၍ ဒဿဂီရိလိုနေရာမျိုးက သူမကချင်..၊ ရုပ်ရှင်တွေ ဇာတ်တွေထဲ၌ ထိုသို့ သရုပ်ဆောင်သူများကိုလည်း အပြင်မှာပါ သူလိုက်ပြီး မုန်းတတ်သည်..။
ဘာပဲ ပြောပြော သိန်းတိုးနှင့် ခွေးမတို့ ငယ်စဉ်က ဇာတ်လမ်းကလေး ရှိခဲ့ရမည်ဟု တော့ သူက တွေးယူသည်..။
“ ငါက မိန်းမတွေ အများကြီး ကြုံလာခဲ့ဖူးတယ်…..ခွေးမ သိလား…၊ ငါလိုကောင်က ငါ့အချစ်ကို စော်ကားရဲရင် ငါက ဆယ်ခါပြန် စော်ကားပြတတ်တဲ့လူဆိုတာ…မင်းစွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထား…သိလား…..”
ခွေးမ တဲ့…၊ သူမကြိုက်တဲ့ နာမယ်ကြီးကို ခေါ်တယ်လေ…။ ခွေးမ ငိုချင်တယ်..။ ဟို နှမလိုး သိန်းတိုးလာသွားပြီးကထဲက ပြဿနာ တက်တော့တာပဲ..။ ခွေးမ သူနားလည်အောင် ပြောပြချင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ခွေးမ မပြောတတ်ဖူး…။ သူ့ကိုလဲ …ခွေးမ စွဲစွဲလမ်းလမ်း ချစ်နေမိပါပြီ…ဆိုတာလဲ မရှက်မကြောက် ပြောဖူးရဲ့ သားနဲ့…။ ညဘက်တွေလည်း ပြန်မအိပ်တာ…များလာပြီ…။ ညဘက် ရေနံဆီ ကုန်တဲ့အထိ …ခွေးမ သူ့ကို ထိုင်စောင့် ပါတယ်..။ ဒီညလည်း ဝတ္တရားမပျက် လင်ကို ထိုင်စောင့်ရင်း အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်…။
လေးလံတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး တစ်ခုက ခွေးမဗိုက်ပေါ်မှာ တက်ဖိလာတော့မှ လန့်နိုးသွားမိတယ်..။ အရက်နံ့ကလည်း မွှန်လို့….။ မီးခွက်ကလည်း ငြိမ်းနေပြီ…။ ခွေးမ သူ့ကို အတင်း တွန်းပစ်လိုက်တယ်..။
“ သွားစမ်းပါ….အိမ်မှန်း ယာမှန်း မသိပဲနဲ့….”
သူက ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ ခွေးမ ပေါင်ကြားထဲကိုသာ တွင်တွင် နှိုက်နေတယ်…။ သုံးလေးရက်ကြီးတောင် ဘာမှ မလုပ်ရတော့ သူမနေနိုင်ဘူးလေ….။
“ အခုမှ ငမ်းငမ်း တက်မနေနဲ့…..ဟွန်း….”
သူ့အသက်ရှူသံတွေက အရမ်းပြင်းတာပဲ…။ မနားမနေပဲ ထမီနားကို ဆွဲလှန်ပြီး လုပ်တယ်…။
“ အင့်…..အင့်……အင့်…ဖြေး…..ဖြေး ဖြေး..လုပ်စမ်း ပါ….တကယ်ပဲ…ရှင်…”
လမ်းကြမ်းမှာ ကားစီးရသလိုပဲ မနားတမ်း ဆောင့်နေတာ…အိမ်ကြီးကို သိမ့်သိမ့်ခါနေတာပါပဲ….။ ကျမခြေနှစ်ချောင်းကို ဆွဲမပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် အားရပါးရ ဆောင့်တဲ့ဒဏ်ဟာ အတော်ထိတယ် ရှင်…။ ကျမလည်း ကိုယ့်လင်က လိုလိုချင်ချင် အငမ်းမရလုပ်တာလေးကိုပဲ…အားရကျေနပ်စွာ ခံနေမိခဲ့ပါတယ်…။
လင်မယားလိုးတာ အဆန်းမှ မဟုတ်တာ…။ ဘာသံတွေ ထွက်ထွက်ဆိုပြီး…ကျမလဲ သူ့ကို မတားဘူး…လွှတ်ပေးထားမိတယ်…။ တစ်ခါတစ်လေ သူက ကျမ နို့နှစ်လုံးကို မမှီမကမ်း လှမ်းဆွဲနေလို့ ကျမက အင်္ကျီ ကျယ်သီးတွေ ဖြုတ်ပေးမိပါသေးတယ်…။
အံကြိတ်ပြီး ညာသံပေး ဆောင့်လိုးရင်းက သူပြီးသွားပါတယ.်..။ ကျမက ဆတ်တငံ့ငံ့နဲ့ ကျန်နေသေးလို့ သူ့ခါးကို ဆွဲပြီး ထပ်ဆောင့်ခိုင်းရပြန်တယ်…။ သူကလဲ ထပ်ဆောင့် လိုးပေးပါတယ်….။
“ ကဲ…မီးခွက် ထွန်းစမ်း…ယောင်ပွ….မင်းတို့ အမြင်ပဲ…”
လက်နှိပ်ဓါတ်မီး အရောင်နဲ့ သိန်းတိုးမျက်နှာကြီးဟာ ကျမ အပေါ်မှာ အထင်းသား ခွလျက်သားကြီး ရှိနေပါတော့တယ်..။
ပါးစပ်ကလဲ ဆဲပြီး ကျမ ဆောင့်ကန် ပစ်လိုက်ပါတယ်…။
“ သူ…..သူ ခေါ်လို့ လာတာပါဗျာ….သူ ခေါ်လို့ လာရတာပါ…..”
သိန်းတိုး လူယုတ်မာ…၊ ကျမကို စောက်ရှက်ခွဲတယ်..။ ကျမ အသားတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်ပြီး ဒေါသတွေ ဖြစ်လာမိတယ်…။
“ ငါ့လင်မှတ်လို့…နင့်ကို ခံတာ ဟဲ့…..မအေလိုး ရဲ့…”
သိန်းတိုးကို လူကြီးတွေ ခေါ်သွားကြတယ်..။ သူက ကျမနဲ့ လူကြီး သုံးလေးယောက် ထိုင်ခိုင်းပြီး …ပြောပါတယ်…။
“ ကျုပ်..အရွယ်မတူတာကို ယူခဲ့မိတာ…ပထမ အမှား…နော်…၊ နောက် ရီးစား ရှိ…မရှိ….မစုံစမ်းခဲ့တာ ..ဒုတိယ အမှား…..”
“ မဟုတ်ဘူး…..ကိုသက်အောင် ..ကျနော် ရှင်းပြမယ်….”
“ ဘာရှင်းပြအုံးမှာလဲ…ကိုအေး….အခုပဲ..တတ်လပ်ကြီး မိနေတာ…ခင်ဗျားတို့ မျက်စိတွေ လီးနဲ့ ထိုးထားလို့လား…..”
“ ဟာဗျာ…..ကျုပ်တို့က ပြေရာ ပြေကြောင်း …”
“ မလိုဘူး….ကျုပ် လူအ မဟုတ်ဘူး…. ပြီးတော့ ကျုပ်ပညာ အရည်အချင်းနဲ့…လဲ…မိန်းမ မရှားဘူး…၊ ဒါပဲ…အဲဒီကောင်နဲ့…ပေးစားလိုက်ကြ…”
ပြောပြီး…ကိုသက်အောင် အိမ်ပေါ်မှ ခုန်ဆင်း ထွက်သွားသည်..။
“ မိုက်လိုက်တာ….ခွေးမရယ်…သိန်းတိုးနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး…..”
“ မဟုတ်ဖူး….မဟုတ်ဖူး…..ကျမ ကိုသက်အောင် မှတ်လို့ ငြိမ်နေတာ…..”
“ သေပါလားဟာ….ကိုယ့်လင် နဲ့ ဒီပြင် ယောက်ျားတောင် နင်မခွဲတတ်ဘူးလား….ခွေးမရယ်….တောရွာတစ်ရွာလုံးတော့ ကျော်ပါပြီကွာ….”
ကျမ သူတို့နားလည်အောင် ရှင်းမပြတတ်ဘူး…။ လက်ပူးလက်ကြပ်ကြီး တက်လုပ်နေတုန်း မိသွားတာဆိုတော့လည်း ကျမ ဘာပြောတတ်တော့မှာလည်း….အရပ်ကတို့ရယ်….။
မိန်းမတွေကို ..ကိုသက်အောင် မယုံချင်တော့ ပြီ…။ ညအခါ သာသော လသည် အေးမြသည်..။ နေ့အခါ ထွန်းလင်းသော နေမင်းသည် ပူလောင် ပြင်းပြသည်..။ နွေတွင် နေပူပြီး ဆောင်းတွင် နှင်းကျကာ မိုးတွင် မိုးရွာသွန်းမှု ရှိသည် ဆိုသော သဘာဝ ဓမ္မ တရားကို မိန်းမတွေ ကျိန်တွယ် ပြောအုန်း…ကိုသက်အောင် မယုံချင်တော့ပါ…။
အခါ ခပ်သိမ်း ချမ်းမြေ့မှုကို လိုလားတောင့်တကြသော လူသားများဆီသို့ သောကဝေဒနာသည် မဖိတ်ခေါ်ပဲ အလည်လာတတ်ကြောင်း ကိုတော့ လက်ခံလိုက်ရသည်..။
တောရွာလေး ရွာ၌ သူမျက်နှာ ဘယ်လို ထားရမှန်း မသိတော့ ..။ ရှက်လိုက်သည်မှာ လည်း ကန်ဘောင်သို့ ရေပင် ထွက်မချိုးရဲလောက်အောင် ဖြစ်သွားသည်..။ ထို့ကြောင့် နောက်တစ်နေ့တွင်ပင် တောရွာလေးကို အပြီးအပိုင် စွန့်ခွာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရသည်..။
“ ကိုကြီး….ခွေးမကို မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့….နော်…”
“ ဟုတ်တယ်….နင့်လို ဖင်သရမ်းတဲ့ ဟာမမျိုး မလိုချင်ဖူး…..”
“ ပြောရက်လိုက်တာ….ကိုကြီး ရယ်….၊ ခွေးမ လင်ငယ် နေတာ မဟုတ်ဘူး….၊ ကိုကြီးလာတာပဲ ဆိုပြီး….ဟို ဥစ္စာ……”
“ တော်စမ်းပါ….ဟာ……လင်ငယ်နေတာ မဟုတ်ပဲ ..အပျော်ခံ တာပေါ့…ဟုတ်လား…….၊ အေး….ထမင်းတစ်လုပ် ရှာမကျွေးရပဲ….အဲသလို ကုန်းတဲ့မိန်းမမျိုးပဲ ရှာပြီး လုပ်တော့မယ်….၊ ဒါပေမယ့်…နင့်လို မိန်းမပဲ…ရှိမှာပါ…..ရန်ကုန်မှာတောင်…ပိုက်ဆံပေးမှ ခံတာ….နင်က အပျော်ခံတာ ဆိုတော့ ..”
“ မဟုတ်ဖူး….အဲဒီလို မပြောပါနဲ့….မဟုတ်ဖူး…..”
ခွေးမ မဟုတ်ဖူး ဆိုတာပဲ ငြင်းနိုင်တယ်..။ ကိုကြီး နားလည်အောင် မပြောတတ်ဘူး…။ ရင်ဝ မှာ အောင့်ပြီး…နာကျင် ပူလောင်နေတယ်…။
ကိုကြီး ရွာမှ အပြီးတိုင် ကျောခိုင်းထွက်သွားခဲ့လေပြီ…။ ခွေးမ နှင့် သိန်းတိုးက လူကြီးများက ဆက်လက် နေရာချပေးသည်..။ သိန်းတိုးကလည်း သူ့အပြစ်ကို ဝန်ချတောင်းပန်သည်..။
“ ငါ….နင့်ကို ချစ်လွန်းလို့ပါ…ခွေးမရယ်…ငါ…ငါ…နင့်ကိုလေ..သေအထိ ပေါင်းသင်းသွားမှာပါ……”
ယုံပါတယ်..၊ သိန်းတိုး စကားတွေကို ခွေးမ ယုံပါတယ်…။ စာရိတ္တ ပိုင်းမှာ အရက်သောက်တာ ဖဲရိုက်တတ်တာကလွဲပြီး..သိန်းတိုးမှာ ဘာအပြစ်မှ မရှိဘူး…။ ခွေးမ လက်ခံခဲ့ရပြန်တယ်…လေ..။
ဒါပါပဲ…၊ သူတို့ယောက်ျားတွေရဲ့ ဆန္ဒက မိန်းမယူတယ်ဆိုတာ… ဒါကိုပဲ အဓိက ထားကြတာပဲ မဟုတ်လားရှင်…။ သိန်းတိုးက ကျမကို အားရပါးရ စပ်ယှက်နေပေမယ့် ကျမရဲ့ အင်္ဂါဇတ်ထဲမှာ အရသာ မတွေ့လှဘူး..။ စိတ်မပါတာလဲ…ပါမယ် ထင်ပါတယ်..။ သိန်းတိုးက လူပျိုပီပီ ကျမကို အကြိမ်ကြိမ် စပ်ယှက်ပါတယ်..။ ကျမ မှေးခနဲ..အိပ်ပျော်တဲ့အထိ သူ ကြာလှပါတယ်..။ ကြာတော့ စောက်ပတ်လည်း ကျိန်းစပ်လာတယ်..။ အရေတွေလည်း အိုင်ထွန်းနေတာပါပဲ…။
“ ခွေးမ…နင် ငါ့လီးကို စုပ်ပေးပါလား…ဟင်….”
“ ဘာ….ဘာ…မအေလိုး…နှမလိုး…ဟင်…နင်က လိုးလို့ အားမရသေးဘူး…စုပ်ခိုင်းရသလား….မအေ….”
ကျမ အသားတွေ ဇိုးဇိုးဆတ်ဆတ် တုန်လာတဲ့အထိ ရှက်ဒေါသတွေ ဖြစ်ရပါတယ်…။ ဒီလောက် ညစ်ပတ် နံစော်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို ကျမ ဘယ်တော့မှ မစုပ်ဖူး…။ သိန်းတိုးက အပေါ်စီး ရထားသူပီပီ..ရယ်ပါတယ်…။
“ အေးလေ….မစုပ်ချင်လဲ နေပေါ့…ငါကတော့ စုပ်တတ်တဲ့…နောက်တစ်ယောက် ထပ်ရှာရုံပဲ ပေါ့….ဟား ဟား….”
ကျမတို့ နှစ်ယောက် အိပ်ခန်းထဲမှာ သတ်ပုတ်ကြပါတယ်…။ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား ဆိုတော့လဲ…ကျမပဲ ငိုရတာပဲပေါ့…။ ကျမ ပျော့ခွေသွားတော့ သိန်းတိုး ဘာလုပ်တယ် မှတ်သလဲ…..။ ကျမ စောက်ဖုတ်ကို လျှာနဲ့ ယက်တာ…..
“ အ…အ…ဟိ…..အ…..အ….ယား တယ်…..အလိုလေးလေး…..အိ….အိ….အ…”
အိုရှင်…..အစေ့လေးကို …စွန်ပလွန်စိ စုပ်သလို စုပ်ပေးနေတာများ….ကျမတော့ သေးတောင် ထွက်ချင်ပါတယ်…။ ဒါပေမယ့်…ခံလို့ကောင်းလှပါတယ်…။ အခုန ရန်ဖြစ်ပြီး သတ်ပုတ်ခဲ့ကြတာတွေ ကိုလဲ ကျမ မေ့သွားတယ်…။ ကျမ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးကို ဖြဲကားပြီး စောက်ဖုတ်ယက်ပေးနေတဲ့ သိန်းတိုး ခေါင်းကို စောက်ပတ်ကြားထဲ အတင်းပဲ ဖိချပြီး ဆွဲဆွဲ ဆောင့်နေမိတော့တယ်….။
သိန်းတိုးဟာ မရွံမရှာနဲ့ ကျမဟာလေးကို တပြတ်ပြတ်နဲ့ ယက်ပေးနေတယ်..။ ကျမလည်း အသဲတုံ အူယား ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာက ဘယ်ဟာနဲ့မှ မတူတာမို့ တဟင်းဟင်း နဲ့ ငန်းဖမ်းသလို ငြီးရင်း ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားပြီး ခံပေးနေမိပါတော့တယ်…။
အရေတွေ ရွှဲအိုင်လာတဲ့ ကျမဟာလေးကို သူက စိတ်ရှိလက်ရှိ တက်လိုးပြန်ပါတယ် ရှင်..။ ကျမ အလူးအလဲ ကောင်းသွားမိခဲ့ရပါတယ်..။ အင်္ဂလိပ်ဆေးလို ဆေးပြားတွေကို စွဲသွားပြီးရင် နောက် သူ့ထက်ပျော့တဲ့ဆေးဆိုရင် အာနိသင် မတိုးတော့ဘူးဆိုတာ ရှင်တို့ ကြားဖူးကြမှာပေါ့နော်….၊ ကျမလေ အခုဆို အယက်ခံ လျှာစောင်းအထိုးခံရပြီးမှ အလိုးခံတတ်နေတယ်…ရှင့်…။
သူ မယက်ပေးရင် ကျမ အာသာမပြေတော့ဘူး..။ သည်တော့ သိန်းတိုးကလည်း ကျမကို အကြပ်ကိုင်တယ်..။ သူ့ဟာကို စုပ်ပေးရမယ် ပေါ့…။
“ နင်….ရေစင်အောင် ဆေးခဲ့…ဟာ….”
သိန်းတိုး နောက်ဖေး ရေကပြင်မှာ သူ့လီးကို ရေဆေး ဆပ်ပြာတိုက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာတယ်..။ ပထမတော့ သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး ပါးစပ်နဲ့တေ့ရမှာကို ကျမ ဝန်လေးလွန်းနေတယ်…။ ရွံသလိုကြီးလဲ ခံစားရတယ်..။ မျက်စိမှိတ်ပြီး ငုံ့စုပ်လိုက်တော့ ရုတ်တရက် သိန်းတိုးက ကျမ ဇက်ပိုးကို ချုပ်ကိုင်ပြီး ဖင်လိုးသလို ဆောင့်လိုးလိုက်ပါတော့တယ် ရှင်…။ ကျမလဲ မျက်ရည်တွေ ဝိုင်းသွားပြီး ဒေါသ ဖြစ်သွားမိပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဝက်ဖြစ်မှတော့ ချေးမကြောက်တော့ပါဘူး…လေ…။ ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ သူ့လီးကို ကျမ လျှာနဲ့ ပွတ်သပ်ထိုးဆွ ကလိပေးလိုက်မိပါတယ်..။ သူတို့ ယောက်ျားတွေဟာလဲ ဒါမျိုးကို အတော်မက်မောကြတာပါလား….ရှင်…။
သိန်းတိုး မျက်နှာဟာ ရှုံ့မဲ့ပြီး တွန့်လိမ်နေပါတော့တယ်..။ ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အစုပ်အယက်တွေသာ မပါခဲ့ရင် ကျမတို့ လင်မယား ကွဲကြမှာ အမှန်ပါပဲ…။ ခုတော့ သူ့စကားနဲ့…ဘာဂျာမှုတ်တာလေးကလဲ အသဲခိုက်အောင် စွဲလန်းခဲ့ရသလို ကျမ ပုလွေ မှုတ်ပေးတာကိုလဲ သူ အစွဲကြီး စွဲလန်းသွားခဲ့ပါပြီ…။
တစ်ခါတစ်ရံ ကိုကြီးကို ကျမ သတိရတတ်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် သိန်းတိုးနဲ့ ယှဉ်ပြီး ဘယ်သူ့ကို ပေါင်းသင်းမလဲလို့ မေးလာကြရင် ကျမ ရင်နာနာနဲ့ သိန်းတိုးကိုပဲ လက်ဆွဲပြမိတော့မှာ အမှန်ပါပဲ ရှင်…။ ကျမအတွက် သိန်းတိုးဟာ အကောင်းဆုံး အလိုးသမား တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ..။ ကျမနဲ့ သိန်းတိုးတို့ဟာ နေ့တွေ ညတွေ သိပ်မရွေးနေကြတော့ပါဘူး..။ တစ်ခါတစ်လေ တောင်ယာထဲကြုံရင် တောင်ယာထဲ..၊ စမ်းချောင်းထဲ ကြုံရင် စမ်းချောင်းထဲ ၊ ခြုံကောင်းလို့ စိတ်ထလာရင်လည်း ထလုပ်လိုက်ကြတာပဲ….။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ငြီးငွေ့မသွားဘူး..။ သူ့ကို မမြင်ရရင် ထွက်သွားပြီလားလို့ ကျမ စိုးရိမ်နေတတ်ပါပြီ..။ သူကလည်း ကျမကို မတွေ့တာနဲ့ ရွာစဉ်လျှောက်ပြီး ရှာတတ်တော့တာပါပဲ…ရှင်..။
“ ခွေးမလေးရယ်… ငါ့ကို မုန်းမသွားနဲ့နော်….“
“ ငါပြောရမဲ့ စကားပါ….သိန်းတိုးရယ်….”
“ နင့်လူကြီးကို မလွမ်းဘူးလား…..ဟင်….”
“ နင့် လိုသာ ယက်ပေးရင်…နင့်တောင် မစဉ်းစားဘူး…”
တကယ်ပါ…ရှင်..၊ ကျမ အပိုတွေ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး..၊ သိန်းတိုးလိုသာ ကိုကြီးက ကျမကို ယုယပေးရင် ကိုကြီး ခြေနဲ့ကန်လွှတ်လဲ ကျမ လိုက်ဖက်ထားမှာ….။ ခုတော့ အပြုအစု အယုအယမှာ သိန်းတိုးဟာ ကိုကြီးထက် သာလွန်နေပြီမို့ ကျမဘဝလေး နေပျော်လာပါပြီ….ရှင်…။
ကိုသက်အောင်တစ်ယောက်တော့ လေနှင်ရာ လွင့်ခဲ့ရပြန်ပါပြီ…။ ဘဝက ကြွေပြီးသစ်ရွက် … လေထဲလွင့်မျောနေသလို အဆုံးမရှိ အစမရှိ…။ ကိုယ့်ဘဝကို ဖြစ်လိုရာဖြစ်စေ ရွက်လွှင့် တက်ဖွင့်ပြီး ခရီးနှင်ပစ်လိုက်ချင်သော်လည်း ခလေးတွေက တန်းလန်း ရှိနေပေသေးရာ သူတို့လေးတွေ အတွက် စဉ်းစားရပေအုံးမည်..။ ကိုသက်အောင်အပေါ် ပုံ့ပုံ့သဘောထားတွေ အပြောင်းကြီး ပြောင်းလဲနေမည်မှာ မုချ ဖြစ်သည်..။
ထို့ကြောင့်လည်း ပုံ့ပုံ့နှင့် တွေ့ရန် မကြိုးစားတော့ပေ..။ သားနှစ်ယောက်ကို ကျောင်းသို့ပို့ပြီး သည်နှင့် ကိုသက်အောင် အလုပ်သွားရသည်..။ အလုပ်က စာအုပ်တိုက်တစ်ခုတွင် သာမန် စာစီသမားဘဝဖြင့် လုပ်ကိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်..။ စာရေးချင်စိတ်လည်း မရှိ..။ ရေးပြီးသာ စာမူများလည်း မကြိုက်…။ ဟိုးယခင်က ထုတ်ဝေသူ ကိုမင်းမောင်လည်း ဘယ်ဆီရောက်နေသည် မသိ..။ ဘဝကို ရေစုန်မှာ မျှောရင်း အလိုက်သင့် အမောဖြေနေသလို…။ ဘာတစ်ခုမျှ ကြိုးကြိုးပမ်းပမ်း လုပ်ကိုင်လိုစိတ် မရှိဖြစ်နေခဲ့ရသည်..။
ဤသို့ အပေါ်ယံကြော ဘဝလေးမျှနှင့် ရင်ဆိုင် ရေစုန်မျှောနေစဉ် ရေစုန်မှာ မျောပါလာသော ခင်သက်မူ နှင့် ထပ်မံ၍ ဆုံဖြစ်ကြရပြန်လေသည်..။ ခင်သက်မူက ထမင်းဆိုင် အငှါးရောင်း မိန်းခလေး စားပွဲထိုး ဆိုပါတော့…။ ကီလီဆိုသည်က လူစုံ …ဘဝစုံ..စရိုက်စုံ ဆိုသည့် နေရာမျိုး…။ အမေရိကန်ပြည်က ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လို အသေးအမွှား ဒုစရိုက်တွေက ဒုနဲ့ဒေး…။ ဖာသယ် ၊ ခါးပိုက်နှိုက် သာမက အလစ်သမား သူခိုးကြီးတွေလည်း ရှိသည်..။ ခင်သက်မူတို့ ထမင်းဆိုင်လေးက ကီလီနှင့် မဝေး…။ ရထားလမ်းအဟောင်းတစ်ခုကို မျက်နှာစာပြုကာ အလုပ်သမား ပျံကျဈေးသည်နှင့် အနိမ့်စား အလုပ်သမားတွေအတွက် ငပိရေ တို့စရာ အားပြုကာ ဈေးပေါပေါနှင့် ရောင်းချပေးနေသည့် ဆိုင်ဖြစ်သည်..။
ကိုသက်အောင်ကလည်း တစ်ခွက်တစ်ဖလားတော့ ပြန်ချဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သည်..။
“ အရမ်း မသောက်နဲ့လေ…အစ်ကို ….ထမင်းမစားနိုင်ပဲ နေအုံးမယ်…”
အနားကပ်ပြီး ဆိုင်ရှင်မသိအောင် သတိပေးတတ်လာသည်..။ နေ့စဉ် မျက်မှန်းတန်းမိလာတော့လည်း အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်စီးယိုယွင်းနေကြသော လူကြီးလူကောင်းလို ဖြစ်နေတော့သည်..။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုသက်အောင် ခင်သက်မူတို့ ဆိုင် မရောက်ဖြစ်ပေ…။ အလုပ်များသဖြင့် ဆိုင်ရှေ့မှ ကြာဇံသုတ်နှင့် ဟင်းခါးဖြင့်သာ တစ်ဝမ်းတစ်နေ့အတွက် ပြီးပစ်လိုက်တတ်သည်..။
“ မနေ့က အသည်းအမြစ် ချန်ထားတာ အစ်ကို ဘာလို့ မလာတာလဲ…..”
“ အလုပ် မအားလို့….”
ကိုသက်အောင်က မိန်းမတွေ ကို သိပ်ပြီး စောက်ရော မဝင်ချင်တော့..။ အာပလာ စကားတွေနှင့် မြှူဘို့ ချဘို့လောက်သာ စဉ်းစားနေကြသူများ အဖြစ် သူ နားလည် လက်ခံထားခဲ့လေသည်..။
ထို့ကြောင့်လည်း ခင်သက်မူကို သိပ်အရောမဝင်..၊ ခပ်မှန်မှန် ခပ်တန်းတန်းသာ နေပြီး သာမန်ဈေးသည်တစ်ယောက်ကို ဆက်ဆံသလိုသာ ဆက်ဆံလေသည်..။
ခင်သက်မူကလည်း မြင်ရုံဖြင့် စိတ်ဝင်စားလောက်သော ရုပ်ရည်မျိုးတော့ မဟုတ်..။ သို့သော် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က ကာမဆန္ဒ အတွက် စဉ်းစားသူများအဖို့ ရှာမှ ရှားသော အချိုးအဆစ် ဖြစ်သည်..။ ခါးဆစ်ဆီမှ ထစ်ပြီး ကားပြန့်လာသော တင်ပါးအစုံက ဝိုင်းစက်အိပဲ့နေသည်..။ ရင်သားနှစ်မွှာက ပုံသွင်းထားသော ပန်းပုရုပ်နှယ် မကြီးလွန်း မသေးလွန်းပဲ ကြွားရွားကော့ပျံနေသည်..။ ခါးသေးသေးလေးက တင်ပါးကြီး လှုပ်ရမ်းသွားလေတိုင်း ယိမ်းနွဲ့ ကျိုးကျသွားတော့မည့်အလား ညွှတ်သွယ် ပျော့ပျောင်းလွန်းသည်..။
တစ်ခါတစ်ရံ ထင်းဖြစ်စေ ၊ ပန်းကန်ခွက်ရောက်ဖြစ်စေ တစ်စုံတစ်ရာကို ကုန်းကောက်လိုက်သော အခါများတွင် လှစ်ခနဲ မြင်လိုက်ရသော ယောက်ျားတစ်ယောက်အဖို့ လှပ်ခနဲ ရင်ထဲလှိုက်ဖိုမောသွားစေသည်..။ စိတ်ထဲ၌ ဤအနေအထားမျိုး ကုန်းပြီး ဖြုတ်လိုက်ရလျင် ဆိုသော အတွေးကလဲ မဆိုင်းမတွကြီး ဝင်ရောက်လာအောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းသည်..။
ထိုမျှ ကြီးမားတင်းရင်းနေသော တင်ပါးကြီးကို ကောက်ညှင်းထုတ်တစ်ထုပ်လို ကျစ်လျစ်စွာ စုစည်းထားသော ထမီလေးအောက်မှ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး အရာက ထင်းနေပြန်သည်..။ ထိုဘောင်းဘီအရာလေးကို မြင်ရသည်ကပင် ခင်သက်မူသည် လွယ်လွယ်ကူကူ ရနိုင်သော မိန်းခလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ကြောင်း ကိုလည်း ပုရိသတို့ ရိပ်စားမိကြလေသည်..။
ကိုသက်အောင်ကတော့ ခင်သက်မူ ဖင်ကို မကြည့်..။ ကြည့်ချင်စိတ် ဝင်လာသည့်တိုင်လည်း စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်..။ လူတစ်ချို့က ခင်သက်မူကို ကြည့်ရင်း ထမင်းစားရန် ရောက်လာကြခြင်း ဖြစ်သည်..။ ကိုသက်အောင်ကတော့ အဝစား ငါးကျပ်ဆိုသည်ကို သဘောကျလို့ ဖြစ်သည်..။
ယခုတလော ထမင်းဆိုင်ဖက် မရောက်ဖြစ်ပြန်…။ ဘုန်းကြီးလမ်း အရက်ဆိုင် တဝိုက်၌ ကိုသက်အောင် ရောနှောနေထိုင်တတ်နေပြန်သည်..။ စိတ်ထဲ၌ တစ်စုံတစ်ရာ လိုအပ်နေသလို ခံစားလာရသဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းသော ပစ္စည်းမျိုးကို ရှာဖွေနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်..။
“ သူ့နာမယ်က ခင်ရီတဲ့….ကြက်သွန်ရောင်းတယ်..အစ်ကို…ဈေးတော့ နည်းနည်း ပိုပေးရတယ်…၊ သူ့ယောက်ျားအလစ်မှာ လုပ်တာ…၊ အန္တရယ်တော့ ကင်းတယ်…”
“ ဟာကွာ….ယောက်ျားကြီးနဲ့…တော့ မလုပ်ချင်ဘူး…ကွာ….”
“ တခြားဆော်တွေလည်း ကျနော် မသိဘူး အစ်ကို….”
သို့နှင့် ကိုသက်အောင် ခင်ရီနှင့် တွေ့ဖြစ်ကြသည်..။ ကိုသက်အောင်က သူ့ကို အကဲခပ်သလို သူကလဲ ကိုသက်အောင်ကို အကဲခပ်သည်..။ နှစ်ယောက်သား စဉ့်အိုးတန်း ဗော့တံတားထိပ် အထွက်ပေါက်ရှိ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှာ ဆုံမိကြသည်..။
“ ဒီကနေ့ ဘယ်သွားကြမှာလဲ…အစ်ကို….”
“ အာ……မသိဘူးလေ….ကျုပ်က..အိမ် မရှိဘူး….”
ခင်ရီက နှုတ်ခမ်းလေးကို စူပစ်လိုက်သည်..။ မျက်မှောင်တွန့်ကွေးပြီး ခြေဆောင့်သလိုလေး ပြုလိုက်သေးသည်.။
“ အဲဒါဆို…..သူများက ဘယ်လိုက်ရမှာတဲ့လဲ…ညနေလဲ ဆိုင်က ပြန်ထွက်ရအုံးမှာ…စိတ်ညစ်လိုက်တာ…ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး….”
ခင်ရီက ထိုသို့ညည်းလိုက်သည်နှင့် ကိုသက်အောင်က သူအမူအယာ ပြစ်ချွဲချွဲကို ကြည့်ကာ တောင်ပြီးသား လီးပင် ပြန်သေသွားရသည်..။
“ ဒီလောက်လဲ စိတ်ညစ်ခံမနေနဲ့လေ…အချိန်မရလဲ…နေ……”
ကိုသက်အောင် ပုခုံးကို ဆွဲရင်း ခင်ရီ ဟိုသည်ကြည့်ရင်း တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောလေသည်..။
“ မြန်မြန်လေး ပြီးချင်ရင်တော့ ဟို….ဆန်ဂိုဒေါင်နောက်မှာ ..တဲလေး ရှိတယ်…လုပ်မလား…ဟင်……”
ကိုသက်အောင် အတော်စိတ်ပိန်သွားသည်..။ ဤမျှ စုတ်ပြတ်ပေကျံနေသော ပတ်ဝန်းကျင်၌ ဘယ်လို ဖီလင်လာမည်နည်း..။ ခင်ရီ ထပ်မံ မဆွဲမှီ…ကားလမ်းကို ဖြတ်ကူးခဲ့သည်..။ လူသွားလူလာ ရှုပ်ထွေးနေသော ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း ညောင်ပင်လေးဈေးသို့ ဖြတ်ကူးခဲ့သည်..။
ခင်ရီ အမှတ်ဖြင့် ကိုသက်အောင် လှည့်မကြည့်..ခပ်သွက်သွက် လျှောက်သည်..။ အနောက်မှ တဖြတ်ဖြတ် ပြေးလိုက်လာသံကို ကြားရသည်..။ လက်မောင်းကိုလည်း တင်းတင်း ဆွဲယူခြင်း ခံလိုက်ရသည်..။
“ အစ်ကိုက နားများလေးသလား မသိဘူး….ခေါ်လိုက်ရတာ….”
မပြုမပြင် …နွမ်းနယ်မောဟိုက်စွာ ပြုံးနေသော အယဉ်မျက်နှာလေးကို နီးကပ်စွာ ရင်ဆိုင်လိုက်ရသည်..။ ကိုသက်အောင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိမှ ခင်သက်မူက ရှက်ရွံ့စွာ လက်မောင်းကို လွှတ်သည်..။
“ အော်…..ကိစ္စ တစ်ခု ရှိလို့ပါ….ခင်သက်မူ..ဘယ်လဲ…”
“ ဒီနေ့….ဆိုင်ပိတ်တယ်လေ……လမ်းဘေး ဆိုင်တွေ လိုက်ရှင်းနေလို့…..”
“ အော်…….တစ်ခုခု စားပါအုံးလား….ခင်သက်မူ….”
“ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ စားကြမယ်လေ….လာ……”
ပလက်ဖောင်း အတွင်းဖက် ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ဝင်ခဲ့ကြလေသည်..။
“ ဟာ…….အစ်ကိုတို့ အတွဲကို နေရာ ပေးပါ….. ဟေ့….”
စားပွဲထိုးလေးက အော်နေကျအသံ ..ထုံးစံအတိုင်း အော်လိုက်သော်လည်း ကိုသက်အောင် ရင်ထဲ နွေးခနဲ ဖြစ်သွားမိသည်..။ ခင်သက်မူ မျက်နှာလေးမှာလဲ ထွတ်ခနဲ ရဲသွားလေသည်..။
“ အုန်းနို့ နှစ်ပွဲ…ပေးပါ…….၊ အကြော်နှစ်ခုစီ ထည့်ပေးနော်…..“
ခင်သက်မူက အုန်းနို့ လှမ်းမှာရင်း ဆံပင်လေးများကို သပ်တင်လိုက်ရာ…ဗိုက်သားဝင်းဝင်းလေးများ လက်သွားလေသည်..။ ကြွားရွားသော ရင်လေးနှစ်မွှာမှာ လဲ ကြွတက်သွားသည်..။ တင်ပါးကြီးအစုံကလည်း ဘေးနှစ်ဖက်သို့ ထိုင်ထားသော ခုံလေးမှ ဘေးသို့ လျှံကျနေလေသည်..။
“ အစ်ကို က စကားနည်းတယ် နော်….အဟင်း…….”
“ အင်း….စကားသိပ်များတာ မတွေ့ဘူးသေးလို့ပါ…..”
“ ဒါဖြင့် ပြောလေ…..စကားတွေ အများကြီး …အဟင်း ဟင်း…….”
“ မပြောတော့ပါဘူး….ရင်ထဲမှာ ပြောပြောနေရတာ များလှပြီ…ဘယ်သူမှ မကြားပဲ ကိုယ့်ဖာသာ ပြောရတာ လွတ်လပ်တယ်….”
“ ဟောတော့….ကဗျာဆရာနဲ့ တိုးနေတာကိုး….”
နှစ်ယောက်သား ကြိတ်ရယ်မိကြသည်..။ အော်….သည်လို ဆန့်ကျင်ဖက်လိင် တစ်ဦးနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် စကားပွဲလေးတွေ မဖွဲခဲ့ရတာ တောင် ကြာခဲ့ပြီပဲ….။
“ အစ်ကို…က အတွေးသမားလား….ဟင်…..”
“ စားဖို့အတွက်ပဲ တွေးနေနိုင်တဲ့ ဘဝပါ..မခင်သက်မူ…..”
ခင်သက်မူ ငိုင်တွေသွားသလို ရှိသည်..။ သို့သော်ချက်ချင်း မျက်နှာကို တည်ပစ်လိုက်ပြီး ရောက်လာသော အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ပန်းကန်ကို ကိုသက်အောင်ရှေ့ ချပေးသည်..။
“ လေဒီ ဖတ်စ်လေ….ခင်သက်မူ အရင်ယူ……”
“ အံမယ်…အစ်ကိုက အနောက်တိုင်း ဦးစားပေး စနစ်ကို လည်း နားလည်တာပဲ..နော်..”
ကိုသက်အောင်လည်း မခင်သက်မူ ကို အံ့အောလေးစားသွား၏…။ လမ်းဘေး ထမင်းဆိုင် စားပွဲထိုးပေမယ့် အသုံးအနှုံးက မြင့်သည်..။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ စားနေစဉ်….
“ အစ်ကို ….ဘဲဥ ကြိုက်လား….”
“ ခင်မူလဲ..ကြိုက်တာပဲ…ဒါပေမယ့် အစ်ကို့ကို ပေးတာ…..”
လှိုက်ခနဲ ပီတိအတွေးလေး….နှလုံးသားကို ပြေးဆောင့်ပြန်သည်..။ ကိုသက်အောင် ခင်သက်မူ လက်ကလေးကို အုပ်ကိုင် လိုက်သည်..။ မရုန်းပဲ စကားတိုးတိုး ပြောသည်..။
ကိုသက်အောင် ပျော်သွားသည်…။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ စားပြီး လေးဘီးတစ်စီး ငှါးကာ ပုဇွန်တောင် အိမ်သို့ ခင်သက်မူကို ခေါ်လာခဲ့မိလေသည်..။ ခင်သက်မူကလဲ လိုက်လာရှာသည်..။
အိမ်သို့ရောက်လာသည်..။ တစ်အိမ်လုံး ရှင်းလင်းနေသည်..။ ပရိဘောဂ ဘာတစ်ခုမျှ မရှိ…။
“ ခင်မူ..တော့ မှားပြီ ထင်တယ်….အစ်ကို….”
“ ဘာလဲ…အစ်ကို့ကို …….ငထောကြီး ထင်နေလို့လား…….”
“ ဟင့်အင်း……..ဒါပြောတာ မဟုတ်ဖူး….အစ်ကို့အိမ်ထောင်သည်မ ရှိမှာပဲ ထင်နေတာ…..”
ဖျာလေးပေါ်သို့ ခင်သက်မူ လဲကျသွားသည်..။ ကိုသက်အောင် ချွန်းအုပ်ထားခဲ့သမျှသော ဆန္ဒအားအင်များ ကမ်းပြိုသလို ဒလဟော ပြိုဆင်းကျလာတော့သည်..။
ကိုသက်အောင် လူတစ်ကာတပ်မက် စွဲလန်းခဲ့ကြရသော ခင်သက်မူ ဖင်အိုးကြီးကို တအားခွပစ်လိုက်ပြီး ညှောင့်သည်..။ ခင်သက်မူ မျက်လုံးလေး ဝိုင်းပြီး ရုန်းကန်ရှာသည်..။
“ ရှစ်ကြီး ခိုးပါရဲ့ အစ်ကိုရယ်….မလုပ်ပါနဲ့ နော်…နော်……”
ပါးမို့မို့လေးပေါ်မှ မိတ်ကပ်လေးများ ပြောင်စင်သွားအောင် ဖိနမ်းပစ်လိုက်သည်..။ လုံးတစ်နေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုတ်ကိုင်ချေမွ သည်..။
“ အာ…..ဒုက္ခပဲ….အိုး..အစ်ကို….အစ်ကိုကလဲ ကွာ…….”
အော်သံ ငြီးသံလေးများ တိုးတိတ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်..။ နွေးထွေးလုံးကျစ်နေသော ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့အပြား ကို မျက်နှာကြီး ဖိကပ်ပြီး နမ်းပစ်သည်..။
တရှူးရှူး တရှဲရှဲနှင့် မီးရထား စက်ခေါင်းကြီး တစ်ခုလို လေမှုတ်သံ အသက်ရှူသံကြီးက ပြင်းထန်လာသည်..။ ခင်သက်မူ လိုက်လာမိတာ မှားပြီ ဟုတွေးနေမိသည်..။ သို့သော် ခင်သက်မူ ရုန်းကန်ချင်စိတ် မရှိ…။ ဆုတ်ကိုင်ချေမွ ပွတ်သပ်ပေးနေသော အစ်ကို့ အယုအယလေးများကို သာယာနေသည်..။ အစ်ကို့လက်တစ်ဖက်က ခင်မူ့ ပေါင်ကြားကို ရွရွလေး ပွတ်သည်..။ ခင်မူ့ မျက်နှာလေး မော့သွားအောင် ကော့တက်သွားသည်..။
ထမီအောက်စကို လှန်တင်လိုက်သော အခါတွင်…..ခင်မူ ပြာပြာသလဲ လိုက်ဖိသေးသည်..။ သို့သော် ဖောင်းကားကြွစူနေသော စောက်ဖုတ်အုံကြီးက အထင်အရှား ပေါ်လာပြီ ဖြစ်သည်..။
အမြဲတမ်း ဝတ်နေကျ အောက်ခံဘောင်းဘီကလဲ ဒီနေ့မှ ဝတ်မလာခဲ့မိ….။ ခင်မူ မျက်ရည်တွေ စို့လာပြီး …..
“ ခင်မူ့ကို သနားပါ….အစ်ကိုရယ်……ခင်မူလေ…..အ…အ…..”
စောက်ဖုတ်ကြီးက အမွှေးသန်သန်ကြီးများ အောက်မှ လိုးချင်စရာ အဆီတဝင်းဝင်းကြီး ဖြစ်နေရာ….ကိုသက်အောင် က လျှာကြီးဖြင့် ထိုးကော် ယက်ပေးလိုက်သည်..။ ခင်မူ ထွန့်ထွန့်လူးသွားပြီး ပေါင်ကြီးနှစ်ဖက်မှာလည်း ဘေးသို့ ပြဲကားသွားရလေသည်..။
ခင်မူက အသားညိုလေရော့သလား မဆိုနိုင်..။ စောက်ဖုတ်လေးမှာ ခပ်ညိုညိုလေး…ပြူးထွက်နေသည်..။ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားကြီးများက လက်နှစ်လုံးခန့် ထိထူလိမ့်မည် ထင်သည်..။ အကွဲကြောင်းကြီးက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြီး မှန်း ထင်ပေါ်လွန်းလှသည်..။ လျှာနှင့် ယက်ပေးလိုက်တိုင်း စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဖားဂုံညှင်းကျောကုန်းလို ဖောင်းဖောင်းပြီး ကြွရွတက်လာလေသည်..။ လေထိုးပေးလိုက်သလား ထင်ရလောက်အောင် မြန်ဆန်လွန်းလှသည်..။
စောက်ဖုတ် ….ဤသို့ တဖြေးဖြေး ဖောင်းကားလာသည်ကိုလည်း ကိုသက်အောင် ခင်မူ ကျမှ မြင်ဖူးခြင်း ဖြစ်သည်..။ လီးကြီးက အစွမ်းကုန် တောင်နေပြီးသားမို့ ခင်မူ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ သို့ တေ့သွင်းကာ အသာအယာလေး ဖိလိုးချလိုက်လေတော့သည်..။
ခင်မူ ကျောလေးကော့သွားကာ ဆီးခုံလေး မောက်တက်သွားအောင် ခါးကို ကြွတက်ပေးလိုက်လေသည်..။ လီးကြီးက စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ ထိထိမိမိကြီး ဆောင့်လိုးချလိုက်ပြန်သည်..။
“ အ……အား…….အစ်ကို ရယ်…..အင်း..အင်း…..”
နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြတ်ထွက်လုမတတ် ကိုက်ထားသော ခင်မူ့မျက်နှာလေးမှာ ရှုံ့မဲ့နေပြီး ဘေးသို့ စောင်းငဲ့ကျနေချေသည်..။ ခင်မူ့ လက်နှစ်ဖက်က ကိုသက်အောင် ပေါင်ကို ကိုင်ထားမိသည်..။ ကိုသက်အောင်၏ သန်မာသော လက်မောင်းကြီးအစုံက ဘရာစီယာလေးအောက်မှ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆွဲယူ ကိုင်ဆုတ်ထားသည်..။
ခင်မူ မျက်လုံးလေးများ မှတ်ထားရှာသည်..။ လည်ပင်း၌ ဆွဲထားသော လော့ကက်သီး ရွှေဆွဲကြိုးလေးက ကြမ်းပြင်သို့ တစ်ဝက်ပုံကျနေသည်..။ ခင်သက်မူ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အားရစရာ ကောင်းလှသည်..။ စောက်ရေကြည်လေးများ ညှစ်ထွက်လာသော အခါတိုင်း …” ဗြစ်…ပြစ်…..” မြည်အောင် တင်းကြပ်နေသည်..။
သွေးကြောကြီးများ ဖောင်းကြွကာ အကြောပြိုင်းပြှိုင်း ထနေသော ကိုသက်အောင် တန်ဆာကြီးက အရေရွှဲနေသော ဧရာမ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ ပြွတ်ခနဲ ဆောင့်ဆောင့် ဝင်သွားတိုင်း စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများ အတွင်းသို့ လိပ်ဝင်၍ ပါပါသွားသည်ကို ..ကိုသက်အောင် အသေအချာ ငုံ့ကြည့်ရင်း လိုးသည်..။ ခင်သက်မူ လက်ကလေး တစ်ဖက်က ဆီးခုံကို လာပြီး ဖုံးထားရှာသေးသည်..။
တစ်ခါတစ်ရံ လီးထိပ်ကြီးက ကျွံထွက်လာသောအခါ… နီလာလက်စွပ်လေး ဝတ်ထားသော လက်ဖမိုးလေးကို လီးထိပ်ကြီးက ထိုးမိသွားတတ်သည်..။ ထိုအခါ ခင်သက်မူက လက်ကို ကပျာကသီ ရုတ်ပြီး… လက်ခုံကို ထမီစဖြင့် ပွတ်သုတ်ပစ်တတ်သည်…။
“ အစ်ကိုက ယက်တောင် ယက်ပေးသေးတာပဲ…ကွယ်…….”
“ အို……သွား..ဘာတွေ ပြောနေတာလဲ……. အား…….အား……..”
“ ခင်မူ့ ဟာကြီးက …အကြီးကြီးပဲကွယ်…..အားရလိုက်တာ….”
ခင်မူ ရှက်တတ်လွန်းသည်..။ ပါးပြင်လေးနှစ်ဖက် ရဲရဲနီအောင် ပင် ငိုမဲ့မဲ့လေး ဖြစ်လာသည်..။
“ ခင်မူ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို အစ်ကို့လီးကြီး ဝင်တာ ခံလို့ ကောင်းလားဟင်…ခင်မူ…ဟေ့….ပြောလေ…..”
“ အင့်…..အင်း…အ…ဒီမှာ သေတော့မယ်….သူက ဘာတွေ လျှောက်မေးနေမှန်း …မသိဘူး..သွား….အ……အင်း အင်း……..”
“ အာ……..အင့်……သိဘူးကွာ…..မေးနဲ့……..အဟင့် ..အဟင့်……အ…….”
“ အ…..ဖြေးဖြေး..အစ်ကို…..အထဲက အောင့်တယ်….အ…အ………”
ကိုသက်အောင် ပြီးချင်လာပြီမို့ ခင်မူ့ စကားကို နားမထောင်ပဲ ဒလကြမ်း မုန်တိုင်းတိုက်သလို ဆောင့်လိုးချလိုက်သည်…။
“ အား……အား……..အစ်ကိုး………အား……နာ…နာ တယ်…………အ..”
ပူနွေးသော ပြစ်ချွဲသော ညှီစို့သော အနံ့များဖြင့် ပွဲစဉ်တစ်ကို ….ရပ်နားလိုက်ကြပြီး …တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဖက်ထားရင်း အမောဖြေနေလိုက်ကြလေသည်..။
ကိုလေး…..ပုံ့ပုံ့လာသွားတယ်…….ကိုလေးနဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် အိမ်ရှေ့မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ တွေ မကြည့်ရဲတာနဲ့ မတက်တော့ဘူး..။ သားနှစ်ယောက်ကို ပုံ့ပုံ့ ခေါ်သွားတယ်…။ ပုံ့ပုံ့ ….အစ်ကိုလေးကို မျှော်နေမယ်……။
Posted on October 11, 2019 Author alanlaymyar
ခြံဝန်းကျယ်ကြီးတစ်ခု၊ နှစ်ဧကခန့် ကျယ်ဝန်းသည်။ ထိုခြံဝန်းကယ်ကြီးအတွင်းရှိ တစ်ထပ်တိုက်လေးက စိမ်းပြာ ရောင်ဆေးသုတ်ထားသည်။ တစ်ထပ်တိုက်ဆိုပေမယ့် ခပ်သေးသေးတော့မဟုတ်ပါ။ အဆောက်အဦးပမာဏပင် ပေ(၅၀) ပတ်လည်လောက်ရှိသည်။ တစ်ထပ်တိုက်လေး၏ နောက်မီးဖိုချောင်နှင့် တည့်တည့်လောက်ရှိ တိုက်လေး၏ ဘေးဖက်နား တွင် ရေစင်တစ်ခုရှိပြီး ထိုရေစင်၏ရှေ့ အိမ်ရှေ့ဘက်နားတွင်တော့ ကားဂိုဒေါင်လေးတစ်ခုရှိလေသည်။ တဖန်တိုက်လေး၏ နောက်ဖက်ခြံဝန်း၏ ဒေါင့်လောက်တွင် ဂိုဒေါင်လိုလို သစ်သားအိမ်လေးတစ်လုံးရှိလေသည်။ ခြံဝန်းကျယ်ကြီးထဲတွင်တော့ သီးပင်၊ စားပင်၊ အပင်ကြီးများ၊ အရိပ်ရ အပင်ကြီးများအပြင် အိမ်ရှေ့ဖက်တွင်တော့ ပန်းအလှများ စိုက်ပျိုးလျက် ခုံတန်းလျား လေးများနှင့်အတူ ပန်းခြံလေးသဖွယ် ပြုလုပ်ထားလေသည်။အချိန်က ည(၁၀)နာရီကျော်ပြီဖြစ်သည်။ ခြံဝန်းထဲရှိ ပန်းခြံလေးထဲတွင် လူတစ်ယောက် ထိုင်နေပြီး လက်ထဲမှ စီးကရက်ကို ဖွာ၍ တစုံတရာကို စဉ်းစားတွေးတော၍နေသည်။ ထိုသူကတော့ ဤခြံဝန်းနှင့် တိုက်တို့၏ ပိုင်ရှင် သူဌေးကြီး […]
မင်းမိန်းမ သစ္စာရှိပါတယ် သူငယ်ချင်း
အောင် ထွန်း။ သူငယ်ချင်း ။ငါ မြ ဆောင် ပါ ကွ ။ အခု ငါ မိုင်းရှူးမှာ တွင်းလုပ်နေတယ်။ပြောရ မှာ ရှက်လိုက်တာကွာ ။ ငါက တမြို့တရွာငွေရှာထွက်နေတဲ့အခိုက် ရွာက မိန်းမက နောက်ဟာနဲ့ ရှုပ်နေသတဲ့။ သူ့ ကောင် က မင်းနေတဲ့မန္တလေးပေါ်က တဲ့။ ကောင် မက ရွာက နေ တလ ၂ခါ လောက် ဈေးဝယ်တက်လာရင်း ညိ နေကြသတဲ့။ ငါကြားရတာ ။အဲ့ဒါနဲ့ ကြံရာမရ မင်းဆီ ဖုန်းဆက်တာဘဲ။ဟုတ် မဟုတ် တချက် စုံစမ်းပြီး ငါ့ကို ပြန်ပြောဦးကွာ ။ ဒီနံပါတ်ပဲ ပြန် ဆက်နော်။ ” ကိုအောင် ထွန်း ဖုန်းနားထောင်ပြီး […]
ကျနော် နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတော့။ အလုပ်တွေ လိုက်လျှောက်တယ်ဗျာ…….မကိုလည်း လွမ်းနာကျ..။နိုင်ငံခြားမှာလည်း ဆယ်နှစ်ကျော်လာတော့ ပျင်းလာလို့ ဆိုပြီးတိုင်းပြည် ပြန်လာခဲ့တာ။ နိုင်ငံခြားက လစာရဲ့ သုံးပုံ ပုံ တပုံလောက် ရရင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတာ ခက်တယ်ဗျာ လစာတွေက အတော်နည်းတယ် မြန်မာပြည်က လူတွေကို တကယ်လည်း အံ့သြမိတယ် ဒီလောက် ဈေးကြီးတဲ့ ကုန်ဈေနှုန်းကို လစာနည်းနည်းလေးနဲ့ တောင့်ခံထားတာ အတော်လေး ချီးကြူးမိပေမယ့် စိတ်ထဲကတော့ တကယ် ဂရုဏာ သက်မိတယ်။ ကံကောင်းတယ်ဘဲ ပြောရမလား မသိဘူး FDI ကုမ္ပဏီ တခုက မြန်မာပြည်မှာ invest လုပ်ပြီး ကုမ္ပဏီ အသစ်တဲ့။ သွားပြီး အင်တာဗျူးလုပ်တာ အောင်သွားတယ် အဓိကကတော့ အင်္ဂလိပ်လို နည်းနည်း ပါးပါး ပြောတတ်ပြီး […]
Total visitors : 32,516
Total page view: 115,381